Famaritana sy fanazavana, fisainana sy faniriana - The Word Foundation
Fanadihadiana momba ny fisainana sy ny voka-dratsy
FANAZARAN-TENY SY FAMPANDROSOANA
Teny sy andian-teny avy amin'ny Thinking and Destiny
Accident, An: dia matetika no lazaina fa zavatra tsy ampoizina na zava-mitranga tsy misy antony. Na izany aza, ny loza iray dia ny sehatra tokana hita ao anaty rojo na boribory tsy hita maso na teo aloha izay tsy azo ihodivirana izay nahatonga io fisehoan-javatra voalaza io. Ny ampahany hafa amin'ny faribolana dia ny eritreritra sy ny asa izay mifandray amin'ny loza.
Aia: Ny anarana eto dia nomena ho an'ny tarika iray izay efa nandroso tsikelikely tamin'ny dingana tsirairay tamin'ny fahatsiarovany ny anjara asany amin'ny Anjerimanontolon'ny Lalàna, ao amin'ny vatana tonga lafatra, tsy misy firaisana ary tsy mety maty; izay efa nahazo diplaoma avy amin'ny natiora, ary eo amin'ny lafiny intelligence toy ny teboka na tsipika manavaka azy amin'ny lafiny natiora.
fisotroan-toaka: dia aretina ara-pihetseham-po amin'ny mpankafy ny faniriana sy ny fihetseham-po, izay areti-mifindra avy amin'ny fisotroana toaka ny alkona. Ny mpisotro toaka dia tena tsara sy azo itokisana, raha atao toy ny mpanompo, na ampiasaina amin'ny famolavolana fanafody famonoana pharmaceutique. Saingy ny alikaola, toy ny fanahy, dia tsy manan-tsiny ary tsy misy dikany rehefa lasa tompony izy. Fotoana iray ihany ny fotoana, amin'ity fiainana ity na amin'ny ho avy, raha toa ny mpiasan'ny tsirairay dia mila tsy maintsy miatrika ny fahatapahana ary handresy na handresy azy. Ny toaka dia tsy mampaninona, raha tsy misotro azy; fitaovana fotsiny izy io. Fa rehefa misotro toaka ny fanahy iray, ny fanahin'ny alikaola dia ny môtô no mifandray amin'ny faniriana ao amin'ny rà, ary miondrika ao anaty ranomaso sy kajoles ny faniriana sy ny fahatsapana ao amin'ny finoana fa namana izany ary mitombo sy mihamitombo izany finoana izany. Ny fanahin'ny fiaraha-miombon'antoka sy ny fiarahana mahafinaritra amin'ny alàlan'ny dingana rehetra mamohehatra izay itarihany ny voany. Ary rehefa tsy dia mendri-kaja loatra ny mpankahala ka mandray ny endrik'olombelona, ​​dia mitarika azy any am-ponja ao anaty tsena anatiny ny fiendahana, ary ao anatin'ny fikorontanan'ny saina. Ny tsy fahatokisan-tena mandaitra dia mihomehy sy mampivadi-po kokoa noho ny afo mirehitra amin'ny teôlôjia na ny helo hafa. Ny toaka no fitehirizana fanahy; kanefa mahafaty ilay zavatra izay miaro azy. Ny fanahin'ny fimamoana dia mampatahotra ny fahazavana mahazatra amin'ny olombelona, ​​ary miezaka ny tsy hahatanteraka ny maha-olombelona. Ny fomba tokana azo antoka fa ny tompony fa tsy ny andevon'ny fanahin'ny toaka dia: Aza manandrana azy. Manàna toe-tsaina hentitra sy voafaritra tsara ary tsy mametraka izany amin'ny fepetra na ny endrika. Dia hisy ny tompony.
Hatezerana: dia maniry ny mandoro ao amin'ny ra ary mihetsika amin'ny lolom-po amin'ny hoe inona na heverina ho diso amin'ny tenanao na amin'ny hafa.
Bika Aman 'endrika: Ny vondrona natambatra ho vondrona na endrika ary hita maso; Mety misy fiovana na fanjavonan'olona, ​​rehefa miova izany na mihemotra izany.
maniry ihany: dia ny faniriana ny hampifaly ny fanandramana sy ny fofona amin'ny fitaovana, ho setrin'ny faniriana ny fikambanana amin'ny natiora mba hitazonana ny raharaha amin'ny fitetezana.
Art: dia fahaizana maneho ny fahatsapana sy ny faniriana.
Astral: dia zava-manahirana.
Astral Body: Ny teny ampiasaina amin'ity boky ity dia ny mamaritra ny fiarovan-tena amin'ny vatan'ny vatana efatra. Ny telo hafa dia ny rivotra, ny solon-tongotra, ary ny solid-solid. Ny vovo-solon-drivotra sy ny vovo-drivotra dia vitsy ihany, tsy izy ireo
dia nanjary lasa endrika. Ny vatana astral dia izay mamolavola ny zava-misy amin'ny vatana mitombo, arakaraky ny endriky ny fofon'aina mandra-pahaterahana. Avy eo, miankina amin'ny vatan'ny astral ny vatan'ny vatana mba hitazonana ny rafitra azy amin'ny endriny
araka ny endriky ny endrika fanorona. Rehefa miala amin'ny vatana ny taovam-pandevonan-tena, dia mijanona eo akaikin'ny rafitra ara-batana ny vatan'ny astral. Avy eo ny vatan'ny astra dia miankina amin'ny rafitra ho an'ny fikojakojana, ary dia zaraina tahaka ny
rivotra iainana: dia ny habetsaky ny zavatra misongadina izay mamoaka sy manodidina zavatra na zavatra.
Atmosfera, Olombelona ara-batana: dia ny vondron'olona madinidinika mampangatsiaka, manempotra, marevaka, ary miorina ary mivezivezy amin'ny rantsana efatra mandroso ao anaty sy amin'ny alalan'ny vatan'ny rivotra, ny lafiny mavitrika amin'ny endrika fofona.
Atmosfer'ny olombelona, ​​Psychic: dia ny ampahany mavitrika amin'ny mpankato, ny ampahany psychic ao amin'ny Triune Self, ny lafiny avao amin'ny ampahany iray misy ao amin'ny voa sy ny adrenalin-tsofina ary ny ngeza an-tsitrapo sy ny ran'ny vatan'ny olombelona. Mivezivezy, manasitrana, manosika sy manosika ny ra sy ny setroka amin'ny vatana ho valin'ny faniriana sy fahatsapana ilay mpanao asa tanana izay miverina ao amin'ny vatana.
Atmosfer'ny olombelona, ​​toe-tsaina: dia ny ampahany amin'ny toe-tsaina ara-tsaina ao amin'ny Triune Self izay mamakivaky ny rivotra iainana ary amin'ny alalan'izany ny eritreritra sy ny fanirian-tsaina dia mety hieritreritra amin'ny tsy fisian'ny fifandimbiasana eo anelanelan'ny dipoavatra tsy tapaka sy ny fofonaina.
Atmosfera, ny Triune Self's One, Noetic: dia azo lazaina hoe, ny valan-drano, izay ny Fahazavana Mahazatra no atolotry ny atmosfera ara-tsaina sy ara-tsaina amin'ny mpihinam-batana amin'ny alàlan'ny rivotra.
Atmosferom avy amin'ny Tany: dia misy faritra efatra na vondrona misy tariby marevaka, lozika, manidina ary matanjaka izay mitazona ny fifindrana tsy tapaka avy amin'ny tany sy amin'ny alàlan'ny cruste ety ety sy ety ambany, ary avy amin'ny sy any ivelany mankany amin'ireo kintana faran'izay lavitra.
fofonaina: dia ny ain'ny ra, ny mpandidy ary ny mpanamboatra tissue, ny mpanararaotra sy ny mpandroba, na ny toetran'ny asa rehetra ao amin'ny vatana dia mbola misy foana na tsy misy ny fisiana, mandra-pisian'ny mieritreritra fa natao hanavaozana sy hamerenana indray ny vatana fiainana mandrakizay.
Fofonaina-teny: dia singa natiora izay endrika maha-olombelona (soul) ny vatan'ny olombelona tsirairay. Ny fofony dia manorina sy manavao ary manome aina ny vatan'ny olona araka ny endrika omena amin'ny endrika, ary ny endriny dia mitazona ny rafitra, ny vatany, mandritra ny fisiany ao amin'ny vatana. Ny fahafatesana dia vokatry ny fisarahana amin'ny vatana.
Cell, A: dia fikambanana iray ahitana vondrona misy olana avy amin'ny rivo-mahery, lolo, ranon-javatra ary vovoky ny zava-manahirana, voalamina ho rafitra velona amin'ny alàlan'ny hetsika mifandraika sy mifanohitra amin'ny singa efatra mpamorona: ny fifandraisana amin'ny rivotra,
ny fifandraisana eo amin'ny fiainana andavanandro, ary ny singa mpamorona singa mifandraika amin'ny sela, izay mametraka io sela io, izay tsy hita maso, fa tsy ny vatan'ny fitambaran-tsoratra izay mety hita na hita eo ambanin'ny mikraoskaopy. Ireo singa mpamorona ireo dia mifamatotra
miara-mitoetra ao amin'io efitra io; Ny singa mpikirakira dia toy ny tondra-drano izay ahafahan'ny mpanatonta manohy manangona sy mamorona ireo singa mpidoroka ao anaty sy ny vatan'ny sela mandritra ny fitohizan'ny fandaminana lehibe kokoa izay ampahany io singa io. Ireo singa efatra mpamorona sela ao amin'ny vatan'olombelona dia tsy azo ekena; raha tsy apetraka amin'ny vondrona mivezivezy izy ireo dia hitsahatra ny vatana, hanjavona ary hanjavona, fa ny mpamorona ny sela dia hanangana vatana amin'ny fotoana ho avy.
Chance: dia teny iray natao hampialana ny tena amin'ny tsy fahatakarana, na hanazava ireo asa, zavatra ary toe-javatra mitranga ary izay tsy mora nohazavaina, ho toy ny "lalao kisendrasendra" na "lozam-pifaliana". Nefa tsy misy zavatra toy ny vintana, amin'ny heviny hoe mety hisy ny zava-nitranga tamin'ny fomba hafa noho izay nataony, tsy miankina amin'ny lalàna sy ny filaminana. Ny hetsika rehetra azo atao, toy ny fandotsahana vola madinika, ny famadihana karatra, ny famoahana aina, dia mitranga araka ny lalàna sy fitsipika sasantsasany, na mifanaraka amin'ny lalànan'ny fizik na ny lalàna momba ny famatorana sy ny famitahana. Raha tsy miankina amin'ny lalàna ny antsoina hoe kisendrasendra, dia tsy hisy lalàna hentitra momba ny natiora. Avy eo dia tsy hisy ahiahy ny fizaran-taona, ny andro sy ny alina. Ireo no lalàna izay tsy takatry ny saintsika, tahaka ireo zava-mitranga "kisendrasendra", izay tsy takiantsika loatra ny mahatakatra izany.
toetra: dia ny halehiben'ny fahamarinan-toetra sy ny fahamarinan'ny fihetseham-po sy ny fanirian'ny olona, ​​araka ny heviny, ny teny sy ny asany. Ny fahamarinana sy ny fahamarinan'ny eritreritra sy ny asa dia ny fototry ny
toetra tsara, ny marika manavaka ny toetra matanjaka sy manintona ary tsy natahotra. Ny endriny dia natiora, nolovana avy amin'ny fiainana teo aloha, ho toy ny fanombantombanana mieritreritra sy hanao zavatra; Mitohy na miova izy rehefa mifidy.
fiombonana: dia ny fifandraisany amin'ny fifandraisana amin'ny fahitsiana, ary amin'ny fandraisana fahazavana, araka ny rafitry ny fisainana.
Ny fiheverana, Andriamanitra, "tsy misy miafina": Tsy ny fanosotra ny fofom-bady amin'ny vehivavy, ny fanarahana ny fery sy ny fahaterahan'ny vatana hafa. Ny fahaterahana ara-piraisana dia tsy afaka hiteraka avy amin'ny fahatanterahan'Andriamanitra. Ny tena "tsy azo ivalozana" dia ny fanorenana ny vatana ara-batana tsy lavoratry ny fahafatesana ho lasa vatana ara-batana tsy manam-petra amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa nifangaro tamin'ny mikrofan'ny volana faha-telo ambin'ny folo teo aloha ireo mikraoba volana latsaka folo, tamin'ny fiverenany ho any an-tampony, dia nihaona tamin'ny mikraosin'ny masoandro izy ary nahazo tara-pahazavana avy amin'ny Intelligence. Izany dia fametrahana ny tenany ho an'ny tenany manokana, fahatsiarovana masina. Ny fanorenana ny vatana tonga lafatra dia manaraka.
Feon'ny fieritreretana: dia ny habetsaky ny fahalalana momba izay tsy tokony hatao amin'ny resaka lohahevitra ara-môraly. Fitsipika iray ho an'ny fisainana marina, fihetseham-po mety ary fihetsika mety; Izany no feo tsy misy feo marina ao am-po izay mandrara ny eritreritra na ny fihetsika izay miovaova amin'ny zavatra fantany fa marina. Ny "Tsia" na "Aza" dia ny feon'ny mpahafantatra momba ny zavatra tokony hialany na tsy hataony
na tsy manaiky ny hanaovana izany amin'ny toe-javatra rehetra.
mahatsiaro tena: dia amin'ny fahalalana; ny fianarana izay mahatsiaro tena dia mahatsapa amin'ny fifandraisany amin'ny fahalalana.
fahatsiarovan-tena: dia ny fisiana amin'ny zava-drehetra-ka ny zavatra tsirairay dia mahatsiaro amin'ny dingana izay ahafantarana azy as inona na of inona izany na inona. Amin'ny tenim-pirenena iray dia ny teny hoe "mahatsiaro" dia lasa ny anarana
ny dikanteny hoe "ness." Teny iray tsy manam-paharoa amin'ny fiteny; Tsy misy dikany ny dikany, ary ny heviny dia lasa tsy takatry ny olombelona. Ny fahatsiarovan-tena dia tsy manam-petra ary tsy misy farany; Indraindray, tsy misy faritra, toetra, toetra, toetra na fameperana. Na izany aza, ny zavatra rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, ao anatin'ny fotoana sy toerana lavitra dia miankina amin'izany, mba ho sy hanao. Ny fanatrehany eo amin'ny sehatry ny natiora sy ny zava-boaary ankoatra ny zava-drehetra dia afaka mamantatra ny zava-drehetra sy ny zavatra rehetra as inona na of inona izy ireo, ary tokony hatao, hahafantatra sy hahatsapa ny zavatra rehetra sy ny zavatra hafa, ary handroso hatrany amin'ny ambaratonga ambony kokoa amin'ny fahatsiarovan-tena manoloana ny hany tena manan-danja indrindra-fahatsiarovan-tena.
minomino foana: dia ny fahavononana tsy manan-tsiny ny mpankato an-tsokosoko mba hino fa ny zavatra dia miseho rehefa miseho izy ireo ary manaiky fa marina izay lazaina na voasoratra.
Kolontsaina: dia ny fampivoarana avo lenta, ny fahaizana ary ny toetran'ny olona, ​​na ny sivilizasiona manontolo.
fahafatesana: dia ny fialan'ny tena ao amin'ny vatana amin'ny fonenany ara-nofo, ny fanararaotana na ny famerenana ny volon'ireo loham-pandaminana miloko marefo izay mampifandray ny fofona amin'ny vatana. Ny fisintahana dia vokatry ny vonona na noho ny faneken'ny tenany ny fahafatesan'ny vatany. Amin'ny fampitsaharana ny kofehy dia tsy azo atao ny fanavaozana.
famaritana: dia io famoronana teny mifandray io izay maneho ny dikan'ny lohahevitra iray na zavatra ary amin'ny fisainana ny hoe misy ny fahalalana.
Descent of Man: dia naseho tamin'ny fomba samihafa sy tamin'ny endrika soratra masina fahiny, toy ny ao amin'ny tantaran'i Adama sy i Eva ao amin'ny saha Edena; ny fakam-panahiny, ny fahalavoany, ny fahotana tany am-piandohana ary ny fandroahana tany Edena. izany
dia aseho toy ny dingana efatra amin'ny fialàn'ny mpangalatra ao amin'ny Fanjakan'ny Faharetana. Ny taranaka avy amin'ny Fanjakan'ny Faharetana eto amin'ity tontolon'ny fahaterahana sy fahafatesana ity, dia tamin'ny alalan'ny fiovaovana, fizaràna, ny fanovana sy ny fihenanam-pitenenana. Nanomboka ny fanovana rehefa nanokatra ny ampahany tamin'ny vatany lavorary ny mpankahala sy ny fihetseham-po ary nahita fahatsapana teo amin'ny ampahany betsaka. Ny fizarana dia ny mahita ny faniriany ao amin'ny vatana ary ny fahatsapany ao amin'ny vatan'ny vehivavy ary ny mieritreritra ny tenany ho roa fa tsy iray, ary ny fialany amin'ny faharetana. Ny fanovana dia ny fiakarana na ny fivoahana avy ao anaty ary ny mpangetaheta mankany amin'ny toetry ny tany ivelany sy ambany ary ny fiovan'ny rafitra. Ny fanavakavahana dia tonga teo amin'ny tany manodidin'ny tany, ny fampiroboroboana ny taovam-pananahana sy ny taovam-pananahana.
Desire: dia hery ao anatiny; Mitondra fiovàna izy io ary miteraka fiovana amin'ny zavatra hafa. Ny faniriana dia ny lafiny mavitrika eo amin'ny mpangalatra ao amin'ny vatana, ny andaniny dia misy fihetseham-po; fa ny faniriana dia tsy afaka manao zavatra raha tsy misy ny lafiny tsy azo sarahina, ny fahatsapana. Ny faniriana dia tsy azo sarahina fa toa mizara; Tokony hanavaka azy io ny: ny faniriana ny fahalalana sy ny faniriana hanao firaisana. Izany, amin'ny fahatsapana, ny anton'ny famokarana sy ny fananganana ny zavatra rehetra fantatra na tsapan'ny olombelona. Satria ny faniriana hanao firaisana dia mijanona ho tsy mazava, fa maneho amin'ny alalan'ny sampany efatra: ny faniriana ny hanina, ny faniriana ny fananana, ny faniriana anarana, ary ny faniriana fahefana, ary ny tsy hita isa azy ireo, toy ny hanoanana, ny fitiavana, fankahalàna , fitiavana, habibiana, fifandonana, fitiavan-karena, faniriana, zava-mahadomelina, fahitana ary fahombiazana. Tsy hohadinoina ny faniriana fahalalana; Tsy maharitra izy io raha ny faniriana ny fahalalan'ny tena.
Faniriana ho amin'ny anarana, (Fame): dia sampona misy ny fahatsapana ny toetra tsy voafaritra ho an'ny toetra iray, izay tsy misy dikany sy mivoatra toy ny bubble.
Faniriana ho an'ny hery: dia noforonina ny tsiambaratelo izay ilay taranaka sy fahavalo amin'ny faniriana ny fahaiza-miaina- (ny faniriana hanao firaisana ara-nofo).
Faniriana ho an'ny fahalalan'ny tena: dia ny faniriana voafaritra sy tsy misy fiafaran'ilay mpankafy amin'ny fifandraisana tsara na ny firaisana amin'ny mpampiasa ny Triune Self.
Faniriana ho an'ny firaisana: dia fitiavan-tena noho ny tsy fahalalana momba azy; ny faniriana ilazana ny firaisana ara-nofo amin'ny vatany, ary izay mikasa ny hiray hina amin'ny tsindry mivaivay sy tsy voatsikera, amin'ny firaisana amin'ny vatana amin'ny ankizilahy mifanohitra aminy.
Famoizam-po: dia ny fahatongavan-tahotra; ny fametraham-pialana tsy misy fepetra hamela ny zavatra hitranga.
Destiny: ilaina; izay tsy maintsy misy na hitranga, vokatry ny zavatra noheverina sy nolazaina na vita.
Destiny, Physical: dia ahitana ny zava-drehetra momba ny lova sy ny lalàm-panorenana ny vatan'ny olombelona; ny saina, ny firaisana ara-nofo, ny endrika ary ny endri-javatra; ny fahasalamana, ny toerana eo amin'ny fiainana, ny fianakaviana ary ny fifandraisana amin'ny olombelona; ny androm-piainana ary
karazana fahafatesana. Ny vatana sy ny rehetra momba ny vatana dia ny teti-bola sy ny fananana izay efa niaina tamin'ny fiainany taloha noho ny eritreritra sy ny nataon'ireo olona teo amin'ny fiainany, ary ny iray amin'izany dia mila miatrika ny fiainana ankehitriny. Tsy misy afa-mandositra ny vatany ary maneho azy. Ny olona dia tokony hanaiky izany ary hanohy hiasa toy ny tamin'ny lasa, na mety hanova izany taloha izany amin'ny zavatra heveriny sy tadiaviny hatao, sy atao, ary ny fananana.
Destiny, Psychic: dia ny zavatra rehetra mifandray amin'ny fahatsapana sy ny faniriana ho toy ny olona miaina ao amin'ny vatana; Izany no vokatry ny zavatra naniry tao an-tsainy taloha sy ny eritreriny ary ny zavatra nataony, ary izay ho avy amin'ny ho avy
inona no tadiaviny sy eritreretiny ary ataony ary hisy fiantraikany amin'ny fahatsapana sy ny faniriana.
Destiny, Mental: dia tapa-kevitra ny amin'izay, ary inona no eritreretin'ny faniriana sy ny fihetseham-pon'ilay mpankahala. Ny saina telo-ny toe-tsaina, ny faniriana, ary ny fahatsapana-dia napetraka eo amin'ny fanompoana ny mpikarakara, ny mpandinika ny Triune Self. Ny fisainana izay ataon'ilay mpankafy amin'ireo hevitra telo ireo dia ny tanjony ara-tsaina. Ny toetrany ara-tsaina dia ao anatin'ny toe-tsainy ara-tsaina ary ahitana ny toetrany ara-tsaina, ny toe-tsaina ara-tsaina, ny fahombiazana ara-tsaina ary ny fanafiana ara-tsaina hafa.
Destiny, Noetic: dia ny habetsaky na ny fahalalan'ny fahaleovan-tena izay manana ny tenany ho toy ny fahatsapana sy faniriana, izay misy, dia ao anatin'io ampahany amin'ny rivotry ny rivotra izay ao anatin'ny rivotry ny saina. Izany no vokatry ny
ny fisainan'ny olona iray sy ny fampiasana ny hery mamorona sy mamorona; Izany dia maneho ny fahalalan'ny olona ny momba ny maha-olombelona sy ny fifandraisana amin'ny olombelona, ​​ary amin'ny iray amin'ny alalan'ny fizarana ara-batana, toy ny olana, fahoriana, aretina, na
aretina. Ny fahalalan'ny tena dia asehon'ny fifehezan-tena, ny fanaraha-maso ny fihetseham-po sy ny fanirian'ny olona iray. Ny anjaran'ny hetra iray dia azo jerena amin'ny fotoanan'ny krizy, rehefa fantatry ny olona iray izay tokony hatao ho an'ny tena sy ny hafa. Mety ho toy ny fanombatombanana ny fahazavana amin'ny lohahevitra iray ihany koa.
Devil, The: dia ny fanirian-dratsin'ny tena manokana. Maka fanahy azy io izy ary manosika ny iray hanao zavatra tsy mety amin'ny fiainana ara-batana, ary mampijaly azy ny iray mandritra ny fotoana aorian'ny fahafatesany.
Dimensions: Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny latina Tsy misy habaka ny haavon'ny toerana, ny habaka dia tsy maotina. Dimy dia misy singa; Ny singam-bolo dia singa fototra tsy misy indraindray; Koa ny zava-manahirana dia endrika fananganana, izay ahitana na ho toy ny singa tsy azo tanterahana mifandraika sy miavaka avy amin'ny karazan-javatra samihafa, toy ny halava. Ny matematika dia manana halava efatra: na zavatra na zavatra hafa; na zavatra madinika; fahamoram-po, na famolavolana; ary ny fisiana, na ny hevitra. Ny isa dia avy amin'ny hita sy mahazatra amin'ny lavitra.
Ny endriny voalohany amin'ny sokajy, na on-ness na ny tontonana, dia tsy manana ny halavany na ny haavony na ny fahavitrihana; miankina amin'ny, ary indrindra indrindra ny tanjona faharoa sy fahatelo, mba hahitana azy, azo tsapain-tanana, matanjaka.
Ny singa faharoa amin'ny sokajy dia midadasika na sehatra; Miankina amin'ny toetr'andro fahatelo izany ho an'ny vovonam-paty eo amin'ny habeny.
Ny fahatelo fahatelo amin'ny singa dia ny faharetana na ny andalana; Izany dia miankina amin'ny fetran-javatra fahefatra mba hitondrany, fitondrana, fampitaovana, fitaterana, entana sy fanondranana entana avy amin'ny raharaha tsy misy fepetra tsy misy fepetra mba hanamboarana ny rindrina eo amin'ny habakabaka ary hikolokolo ny vatana ho toy ny teboka matanjaka.
Ny fizarana fahefatra amin'ireo singa ireo dia ny fisiana na ny toetoetrany, ny fizotry ny tohatra ho toy ny lala-manan-danja fototra, amin'ny alalan'iza na aiza na aiza no amboamboarina sy amboamboarina ny teboka manaraka. Araka izany, dia hita fa ny endriky ny tsy fisian'ny fisainana dia miseho amin'ny alàlan'ny na amin'ny alalan'ny teboka iray, ary amin'ny maha-fifandimbiasana ny hevitra asehon'ny sehatra maromaro, amin'ny alalàn'ny fivelaran'ny singa manaraka ho toy ny famolavolana, ary Amin'ny alalan'io no misy dikany na hevi-dàlana, izay mampifandray ireo rindrina eo amin'ny habakabaka mandra-pahatongan'ny toe-javatra hentitra azo tsapain-tanana, dia aseho amin'ny asa, ny zavatra ary ny fisehoan'ity tontolon'ny zava-kendren'ny tanjona ity.
aretina: Ny aretina dia vokatry ny fihoaram-peon 'ny eritreritra iray rehefa manohy ny fandehanana amin'ny ampahany na ny vatana izay voakasika, ary amin'ny farany dia ny fikajiana izany fiheverana izany no aretina.
tsy fahamarinan-toetra: dia ny fisainana na ny fihetsika mifanohitra amin'ny zavatra fantatra ho marina, sy ny fisainana sy ny fanaovana ny zavatra fantatra fa diso. Ny olona mieritreritra sy manao izany dia mety hino fa ny marina dia diso; ary ny marina dia marina.
mpanao: Ity ampahany miaina sy tsy azo sakanana ao amin'ny Triune Self izay miverina tsindraindray ao amin'ny vatan'ny lehilahy na vatana, ary matetika izy no manondro ny vatany sy ny anaran'ny vatana. Mizara roa ny anjaran'izy ireo, enina ny enina amin'ny lafiny azy, ary ny enina dia mitovy amin'ny fahatsapana. Ireo ampahany enina amin'ny faniriana indray dia misy indray ao amin'ny vatan'ny olona ary ireo ampahany enina misy ny fahatsapana indray dia efa misy ao amin'ny vatan'ny vehivavy. Fa faniriana
ary ny fahatsapana dia tsy misaraka; Ny faniriana ao amin'ny vatan'olombelona dia nahatonga ny vatana ho lahy ary manapaka ny fahatsapana azy; ary ny fahatsapana tao amin'ny vatan'ny vehivavy dia nahatonga ny vatany ho vehivavy ary manapaka ny faniriany.
isalasalana: dia toe-javatra misy ny haizina ara-tsaina noho ny tsy fisainana mazava loatra hahafantarana ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao amin'ny toe-javatra.
Dreams: dia ny tanjona sy ny lohahevitra. Ny nofinofisiny dia ny fikandrana na ny toetry ny mahatsiaro; Na izany aza, dia ny nofinofy mihomehy. Ny nofinofy matotra dia ilay nofinofy matory. Ny fahasamihafana dia ao anatin'ny fotoana fohy
Manonofy ny zava-drehetra na feo izay hita na heno ary toa tena marina dia ny fitrandrahana ny eritreritry ny tena manokana na ny hafa ao ambadiky ny tontolon'ny tanjona; Ary, ny zavatra hitantsika na renay ao amin'ny nofinofy matory dia ny fisaintsainana eo amin'ny tontolon'ny tontolo mifanaraka amin'ny tanjon'ny tanjona manerantany. Na dia manonofinofy amin'ny matory aza isika, dia tena misy dikany tokoa ny fisaintsainana toy ny fiandrasana ao amin'ny tontolo mifoha
ankehitriny. Fa, mazava ho azy, rehefa mahatsiaro isika dia tsy afaka mahatsiaro ny tena marina momba ilay nofinofy matory, satria manomboka izao tontolo izao dia toa maizina sy tsy misy ny tontolo nofinofy. Na izany aza, ny zavatra rehetra hitantsika na henontsika na ataontsika amin'ny nofinofy dia ny fisaintsainana misimisy kokoa na kely kokoa momba ireo zavatra mitranga amintsika sy ireo zavatra eritreretintsika mandritra ny fahantrana. Ny nofy matory dia azo oharina amin'ny fitaratra iray izay maneho ny zavatra natao teo anoloany. Amin'ny fisaintsainana ny zava-mitranga ao amin'ny nofinofy matory dia mety handika teny betsaka momba ny tenany, ny eritreriny sy ny fihetsiny, fa tsy mbola fantany akory. Ny fiainana nofinofy dia tontolo hafa, goavana sy miovaova. Tsy mbola nisy ny nofy, fa tokony ho sokajy, farafaharatsiny ho karazany sy karazany. Ny maty aorian'ny fahafatesana dia mifandray amin'ny fiainana eto an-tany tahaka ny nofinofy matory eo amin'ny fanjakana mihozohozo.
adidy: dia izay tokony ho an'ny tenany na ho an'ny hafa, izay tsy maintsy aloa, an-tsitrapo na tsy sitrakao, amin'ny fahatanterahan'io andraikitra io. Ny fehikibo dia mamatotra ny mpankahala ny vatan'ny olona miverimberina ety an-tany, mandra-pialan'ny mpihetraketraka
fanatanterahana ny andraikitra rehetra, an-tsitrapo sy amim-pifaliana, tsy misy fanantenana ho an'ny fiderana na ny tahotra ho meloka, ary ny tsy fisian'ny vokatra tsara amin'ny vokatra tsara.
"Honina": dia teny iray ampiasaina hanondroana faniriana masiaka iray avy amin'ny fiainan'ny mpitrandraka taloha teo amin'ny vatan'olombelona, ​​izay mitoetra ao anatin'ny toe-piainana ara-tsaina ary miezaka ny manefa ny vatana ary manindrona ny mpanao herisetra amin'ny herisetra, na amin'ny fampiasana zava-mahadomelina mpanota sy vatana. Ny tompon'andraikitra dia tompon'andraikitra amin'ny faniriany, toy ny mpangalatra na toy ny akanjom-basy; ny faniriany dia tsy azo ravana; Tsy maintsy miova amin'ny toe-tsaina sy ny sitrapony amin'ny farany izy ireo.
maty: dia ny fikolokoloana tampoka na efa ela no nanintona ny endriny tsara indrindra avy amin'ny tendrony ka hatrany am-po ary avy eo miparitaka amin'ny vava miaraka amin'ny fofona farany amin'ny fofon'aina, ka matetika no miteraka na mitabataba ao amin'ny tendany. Rehefa maty izy dia mamela ny vatana amin'ny fofona.
mora foana: dia vokatry ny fianteheran'ny mpandeha amin'ny anjara sy ny azy; poana amin'ny asany, tsy misy harena na fahantrana, toerana eo amin'ny fiainana, na fianakaviana na namana.
hambom-pon'ny: dia ny fahatsapana ny maha-izy azy ny "izaho" an'ny olombelona, ​​noho ny fifandraisana amin'ny fahatsapana ny maha-izaho ahy ny Triune Self. Ny endriny dia ahitana ny toetra maha-olona amin'ny tenany manokana, fa ny ego ihany no fihetseham-po ny maha-izy azy. Raha ny
Ny fahatsapana dia ny maha-izy azy, ny fahatsapana ao amin'ny vatana dia mahafantatra fa ny "I" maharitra sy tsy mety maty izay mitohy manerana an'izao fotoana izao amin'ny tsy fitoviana tsy tapaka, fa ny olombelona olombelona dia tsy mahafantatra intsony momba azy
Element, An: dia iray amin'ireo karazam-borona fototra efatra izay natokana ho an'ny zavaboary, ary ny vatany na ny zava-misy rehetra dia mifototra, mba hahafahan'ny singa tsirairay miavaka amin'ny karazany avy amin'ny singa telo hafa, ary ny karazany tsirairay avy Mety ho fantatra amin'ny toetrany sy ny asany izy io, na mifangaro sy miasa toy ny herin'ny natiora na ao amin'ny firafetan'ny vatana.
Elemental, An: dia singa iray natokana ho an'ny singa afo, na ny rivotra, na ny rano, na ny tany, ny tsirairay; na toy ny singa tsirairay avy amin'ny singa iray ao amin'ny vondron'olon-karena hafa ary manjaka izany vondron'olona izany.
Elementals, Ambany: dia avy amin'ny singa efatra amin'ny afo, rivotra, rano ary tany, antsoina hoe causal, portail, endrika ary rafitra. Izy ireo no antony, fiovana, mpitantana ary ny endriky ny zava-drehetra amin'ny natiora izay
izay misy fiovana, izay mijanona mandritra ny androm-piainana, ary hamongotra sy ho levona, haverina indray amin'ny endrika hafa.
Elementals, Ambony: dia ny biby, ny rivotra, ny rano, ary ny tany, izay noforonin'izy ireo avy amin'ny Intelligences of the sphere, na ny Triune Selves feno, izay ny Governemanta eran'izao tontolo izao. Avy amin'ny tenany
Tsy mahalala na inona na inona ireny biby ireny ary tsy afaka manao na inona na inona. Tsy ny singa natokana ho an'ny natiora izy ireo, toy ny vondrona natiora, amin'ny fizotran'ny fampandrosoana. Izy ireo dia noforonina avy amin'ny endrika tsy miseho eo amin'ireo singa amin'ny fisainana, ary mamaly tsara ny fisainan'ny Triune Selves izay mitarika azy ireo amin'ny zavatra tokony hataony. Izy ireo dia lalàna mpihazakazaka, izay tsy ahafahan'ny andriamanitra natiora na hery hafa hanjaka. Ao amin'ny fivavahana na ny fomban-drazana dia mety ho voatondro ho anjely, anjely, na iraka izy ireo. Miasa amin'ny alalan'ny filaminana mivantana avy amin'ny Governemantan'izao tontolo izao izy ireo, tsy misy fitaovana maha-olombelona, ​​na dia toa iray na maromaro aza no toa manome torohevitra ho an'ny olombelona, ​​na hitondra fiovana eo amin'ny raharahan'ny olombelona.
fihetseham-po: dia ny fientanentanana sy fanehoana faniriana amin'ny teny na asa, ho setrin'ny fahatsapana alahelo na fahafinaretana amin'ny fahatsapana.
fialonana: dia ny fahatsapana ho marary-na faniriana mangidy amin'ny olona iray na izay manana faniriana hanoanana na ho an'ny.
Fitoviana eo amin'ny olombelona: dia ny olona tompon'andraikitra tsirairay no manana zo hanana eritreritra, ho te-hanao, hanao, ary hanana, izay azony atao, te-hanao, hanao sy hanana, tsy misy hery, fanerena na famerenana fa tsy manandrana
mba hisorohana ny hafa amin'ny zo mitovy.
Mandrakizay, Ny: dia izay tsy misy fiantraikany amin'ny vanim-potoana, ny tsy manam-petra sy tsy misy fiafarana, ao anatin'ny fotoana fohy sy ny eritreritra, tsy miankina, voafetra na mety ho azo tsapain-tanana amin'ny fotoana sy ny saina toy ny lasa, ankehitriny na ho avy; fa izay zavatra fantatra araka ny maha-izy azy, ary izay tsy afaka miseho tahaka ny tsy azy ireo.
Experience: dia ny fahatsapana ny fihetsika, ny zavatra na ny fisehoan-javatra mamokatra amin'ny alalan'ny fahatsapana ny fahatsapana ao amin'ny vatana, sy ny fihetseham-po ho valin'ny fahatsapana ho alahelo na fahafinaretana, fifaliana na alahelo, na fahatsapana na fihetsehampo hafa. Ny traikefa no fototry ny fanavakavahana amin'ny mpikarakara ary tokony hampianatra, fa ny mpikarakara dia mety handraisana fianarana avy amin'ny traikefa.
Exteriorization, An: dia ny asa, ny zava-mitranga na ny fisehoan-javatra izay ny fahatsapana ara-batana amin'ny fisainana alohan'ny hanafana azy ho toy ny asa, zavatra na zava-nitranga teo amin'ny fiaramanidina ara-batana, ho anjaran'ny vatana.
Facts: dia ny zava-misy eo amin'ny zava-kendren'ny tanjona na toe-javatra, na zavatra na zava-mitranga ao amin'ny fanjakana na eo amin'ny fiaramanidina izay niainan'izy ireo na notandremany, araka ny hita sy tsapan'ny eritreritra, na noheverina sy noeritreretina noho ny antony. Ireo tarehimarika dia karazana efatra: zava-misy ara-batana, toe-javatra misaina, toe-tsaina misaina, ary toe-javatra tsy misy.
finoana: dia ny fisainan'ny mpankafy izay mahatonga ny fahatsapana mahery vaika amin'ny fofon'aina noho ny fahatokisana sy ny fahatokiana tsy misy isalasalana. Avy amin'ny mpino ny finoana.
lainga: dia fanambarana ho toy ny tranga izay heverina fa tsy marina, na ny fandavana ny zavatra heverina ho marina.
Fame, (anarana): dia ny vondrona miovaova ny fahatsapana ny toetra tsy voafaritra ho an'ny toetra, izay mipoitra toy ny blasfes.
Aza matahotra: dia ny fahatsapana ny loza ateraky ny loza na ny loza mitatao amin'ny olana ara-tsaina na ara-pihetseham-po na ara-batana.
Feeling: dia ny an'ny tenany manokana ao amin'ny vatana izay mahatsapa; izay mahatsapa ny vatana, fa tsy mamantatra sy manavaka ny tenany ho fahatsapana, avy amin'ny vatana sy ny fahatsapana izay tsapany; Izy io dia ny sisin'ny mpandoka-batana, ny lafiny mavitrika izay faniriana.
Feeling, fisarahana amin'ny: dia ny fahalalahana amin'ny fanaraha-maso ny vatan'ny saina ary ny fanatontosana ny tenany ho fifaliana mahatsiaro.
Food: dia fitaovana natokana ho an'ny natiora, izay ahitana fitambarana maro tsy hita isa avy amin'ny afo, ny rivotra, ny rano ary ny ety an-tany, mba hananganana ny rafitra efatra sy ny fanamafisana ny vatana.
Form: dia ny hevitra, karazana, lamina na drafitra izay mitari-dàlana sy mamaritra ary mametraka fepetra amin'ny fiainana toy ny fitomboana; ary mamolavola tranobongo sy rafitra fijery amin'ny endrika ivelany.
Freedom: dia ny fanjakana na ny toe-javatra misy ny faniriana sy ny fihetseham-pon'ilay mpankahala rehefa miala amin'ny natiora izy ary mbola tsy voavaha. Ny fahafahana dia tsy midika hoe afaka miteny na manao izay tiany ny olona, ​​na aiza na aiza misy azy. Fahalalahana dia: ny te-ho avy ary ny sitrapony sy ny ataony ary tsy manana fifandraisana amin'ny zavatra na zavatra amin'ny zavatra efatra; ary mba hanohizana, ny sitrapo, ny hanao, ary ny fananana, tsy misy ifanarahana, amin'ny fisainana, na inona na inona na inona na inona, na atao na atao. Midika izany fa tsy mifanentana amin'ny sainam-pirenena na zavatra iray ianao, ary tsy hiantehitra amin'ny tenanao. Ny fametahana dia midika hoe fanandevozana.
function: dia ny fihetsika natao ho an'ny olona iray na zavatra, ary izay tanterahina amin'ny safidy, na amin'ny ilàna azy.
filokana: dia ny fanangonam-bola avy amin'ny iray amin'ny filokana, na ny faniriana kiritika mahafinaritra hivoaka, ny handresena vola na zavatra manan-danja amin'ny "vintana", amin'ny alalan'ny "betting", amin'ny lalao "lozabe", raha tokony handoavana izany amin'ny asa marina.
Genius, A: dia iray izay maneho ny fahaiza-manaony sy ny fahaiza-manaony izay manavaka azy amin'ny hafa eo amin'ny sehatry ny ezaka ataony. Ny fanomezam-pahasoavany dia manan-kery. Tsy nianatra tamin'ny fiainana amin'izao fotoana izao izy ireo. Nahazo karazana eritreritra sy ezaka maro izy ireo teo amin'ny fiainany taloha ary nentina niaraka taminy noho ny lasa. Ny toetra mampiavaka ny génie dia ny momba ny hevitra, ny fomba, ary ny fomba mivantana hanehoana ny fahaizany. Tsy miankina amin'ny fampianarana amin'ny sekoly rehetra izy; Mihevitra ny fomba vaovao izy ary mampiasa ny iray amin'ireo sainy telo amin'ny fanehoana ny fihetseham-pony sy ny faniriany araka ny eritreritra. Mifandray amin'ny habetsaky ny fahatsiarovany ny lasa teo amin'ny sehatry ny siany izy.
Germ, The Lunar: dia novokarin'ny rafitra generative ary ilaina amin'ny fananganana ny vatan'olombelona, ​​ho toeram-ponenana ho an'ny mpanamboatra miverina indray. Antsoina hoe lunar izy io satria ny diany amin'ny alalan'ny vatany dia mitovitovy amin'ny vanim-potoan'ny vanim-potoana mihamitombo sy mihena, ary misy fifandraisana amin'ny volana. Manomboka amin'ny vatany izy io ary manohy ny lalan-drivotra amin'ny alàlan'ny tsiranoka amin'ny tsindrin-tsakafo sy ny taratasy mivalona mahasalama, ary raha tsy very, dia miakatra eny amin'ny loha. Amin'ny alàlan'ny lalana midina dia manangona ny hazavana izay nalefa tamin'ny natiora, ary naverina avy amin'ny natiora amin'ny sakafo entina ao anatin'ny rafi-pandaminana, ary manangona fahazavana avy amin'ny ra izay naverina amin'ny fifehezan-tena.
Germ, The Solar: dia ampahany amin'ny mpankato izay ao amin'ny taovam-pananahana amin'ny fahamaotiana ary misy mazava mazava. Nandritra ny enim-bolana dia nidina izy, toy ny masoandro, teo amin'ny lalana atsimo, teo amin'ny ilany havanana amin'ny tadin'ny hazon-damosina; Avy eo, dia mitodika amin'ny taolam-paty voalohany izy ary miakatra eo amin'ny ilany havia eo amin'ny farany avaratra mandritra ny enim-bolana mandra-pahatongany amin'ny vatan'ny pineal. Any amin'ny faritra atsimo sy avaratra, dia mitazona ny tadim-piavonavona, ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Mihamafy ny mikraoba mandritra ny volana rehefa mandalo ny mikraosana masoandro.
Glamor: dia fanjakana iray izay mahavariana ny zavatra iray na zavatra iray amin'ny alalan'ny fofona, izay manenika ny fihetseham-pony sy ny faniriany, ary mihazona azy ho babo, ka manakana azy tsy hahita amin'ny alalan'ny fahatsinjovana, ary amin'ny fahatakarana izany zavatra toy ny tena izy.
haizim-pito: dia toe-tsaina saro-pantarina, noho ny fanaratsiana ny fahatsapana sy ny faniriana tsy mety. Ao anatin'izany dia mety miteraka rivotra iainana izay mety hahasarika ny eritreritry ny tsy fahamendrehana sy ny tsy fahampian-tsakafo, izay mety miteraka loza amin'ny tenany sy
ny hafa. Ny fanasitranana ho an'ny haizim-pito dia ny fiheveran-tena ho an'ny tenany sy ny hetsika mety.
Andriamanitra, A: dia fisainana, noforonina avy amin'ny eritreritry ny olombelona ho toy ny solontenan'ny halehiben'ny zavatra tsapany na ny tahony; tahaka izay mety ho tian'ny olona iray, mety ho te hanao, ary hanao.
Governemanta, Self-: Ny tenanao, ny tenako, dia ny habetsahan'ny fihetseham-po sy ny fanirian'ny mpikaroka izay ao anatin'ny vatan'olombelona ary iza no mpandraharaha amin'ny vatana. Ny governemanta dia fahefana, fitantanana ary fomba izay entina manapaka ny vatana na ny fanjakana. Ny fitondrana samirery dia midika fa ny fihetseham-po sy ny faniriana ao am-pon'ny olona, ​​na amin'ny tendrony, ny fanavakavahana na ny faniriana hanakorontana ny vatana, dia hamehezana sy hitarika ary hifehezana ny faniriana tsaratsara kokoa izay maniry sy manao zavatra amim-pahamendrehana sy fisainana, toy ny fitsipiky ny fahefana avy ao anaty, fa tsy mifehy ny tiana sy ny tsy tian'izy ireo momba ny zavatra eritreretina, izay ny manampahefana ivelan'ny vatana.
Grace: dia hatsaram-panahy feno fitiavana ho an'ny hafa, ary fanamafisana ny eritreritra sy ny fihetseham-po izay ambaran'ny fifandraisana amin'ny endrika sy ny asa.
lehibe: dia amin'ny maha-fahaleovan-tena azy amin'ny andraikitra sy ny fahalalana eo amin'ny fifandraisany sy amin'ny fifampiresahana amin'ny hafa.
fitiavam-bola tafahoatra: dia ny faniriana tsy mety afa-po, ny manana, ary ny mitazona izay tadiavina.
Ground, Common: dia ampiasaina eto mba midika hoe toerana na vatana na na roa na mihoatra mihaona amin'ny tombotso iraisam-pirenena. Ny tany no sehatry ny fihaonan'ireo mpikarakara ny olombelona mba hiara-hiasa amin'ny tombontsoany iombonana. Ny vatan'olombelona no sehatra iraisana ho an'ny hetsika eo anelanelan'ny mpitrandraka sy ny singa amin'ireo singa natoraly izay mamakivaky izany. Toy izany koa ny tany ety ambonin'ny tany izay ahitan'ny olona rehetra eto an-tany tahaka ny zavamaniry sy biby izay miposaka sy miaina eto an-tany, ary ny endrik'izy ireo dia lasa endrika faniriana sy fahatsapana ho an'ny olombelona.
fahazarana: dia ny fanehoana amin'ny teny na ny asan'ny fahatsapana amin'ny endrika fofona amin'ny fisainana. Ny fiverimberenan'ny feo hafahafa na fihetsika matetika dia miteraka tsy fahamendrehan'ny olona sy ny mpanara-maso, izay azo inoana fa mihamitombo kokoa raha tsy esorina ny antony. Azo atao izany raha tsy manohy ny fisainana izay mahatonga ny fahazarana, na amin'ny fisainana tsara: "atsaharo" ary "aza averina" - na inona na inona teny na fihetsika. Ny fisainana tsara sy ny toe-tsaina manoloana ny fahazarana dia hamela ny fahatsapana amin'ny endriky ny fofona, ka izany dia hisorohana ny fiverenany.
Hall of Judgment: dia aorian'ny fahafatesan'ny fahafatesana izay hitan'ny mpikaroka. Ny tena zava-misy dia toa ny hazavan'ny hazavana no tena ampahan'ny Light Conscious. Mahagaga sy mahagaga ilay mpankafy ary mandositra, na aiza na aiza, raha mety; fa
tsy afaka. Fantany ny endriny izay, ety an-tany, nino ny tenany, na dia tsy ao aza izany; Ny endriky ny endrika dia endriny tsy misy vatana. Ao anatin'io orinasa io, ny Fahazavana Mahalala, ny Fahamarinana no mahatonga ny
Nahatsiaro ny zavatra rehetra ninoany izy, ary ny zavatra nataony teo amin'ny vatany teto an-tany. Ny mpankafy dia mahatsapa izany tahaka ny maha-Fahazavan'ny Fahazavana, ny Fahamarinana, mampiseho azy ireo, ary ny Mpitsara mihitsy no mitsara azy, ary ny
Ny fitsarana dia mahatonga azy ireo ho toy ny adidy amin'ny fiainana ho avy eto an-tany.
fahasambarana: dia vokatry ny zavatra eritreretina sy ataony mifanaraka amin'ny rariny sy ny antony, ary ny toetry ny faniriana sy ny fihetseham-po rehefa ao anaty sendikà mirindra izy ireo ary manana
Fanasitranana amin'ny fametrahana tanana: Mba hahasoa ny marary dia tokony ho takatr'ireo mpitsabo fa fitaovana vonona hampiasain'ny natiora fotsiny izy mba hamerenana indray ny rafitry ny fiainana voatahiry
na manelingelina ny vatan'ny marary. Ity mpitsabo ity dia mety hanao ny palma amin'ny tanany havanana sy havia eo anoloana sy aoriana ny loha, ary avy eo amin'ny telo hafa mety amin'ny atidoha, ao amin'ny kisoa, ny kibony, ary
ny valahany. Amin'ny fanaovana izany, ny vatany dia ny fitaovana ampiasain'ny hery elektrônika sy ny herim-batana ary manitsy ny fomba fiasan'ny marary amin'ny asa ataony amin'ny alalan'ny natiora. Ny mpitsabo dia tokony hijanona ao
Ny tsara dia tsara, tsy mieritreritra ny haba na ny harena.
Fanasitranana, toe-tsaina: dia ny fanandramana hanasitranana aretina ara-batana amin'ny fomba ara-tsaina. Maro ireo sekoly manandrana mampianatra sy mampihatra ny fanasitranana aretina amin'ny ezaka ara-tsaina, toy ny fandavana ny aretina, na ny fanamafisana ny fahasalamana
ho solon'ny aretina, na amin'ny alalan'ny vavaka, na amin'ny famerimberenana teny na fehezanteny, na amin'ny alalan'ny ezaka ara-tsaina hafa. Ny fisainana sy ny fihetseham-po dia misy fiantraikany amin'ny vatana, amin'ny fanantenana, ny fifaliana, ny fifaliana, ny alahelo, ny olana, ny tahotra. Ny fanasitranana aretina tena izy dia mety
izay voakasik'ilay fandanjana ny eritreritra izay ny aretina dia ny fanavakavahana. Amin'ny fanesorana ny antony dia very ny aretina. Ny fandavana ny aretina dia mino. Raha tsy misy aretina dia tsy misy ny fandavana izany. Raha misy ny fahasalamana dia tsy misy na inona na inona azo atao amin'ny fanamafisana ny zavatra efa misy.
nandre: dia ny vondron'ny rivotra, izay miasa ho ambasadera ao amin'ny vatana amin'ny rivotra ao anaty vatana. Ny fihainoana dia ny fantsona izay ahafahan'ny singa-toeran'ny rivotra sy ny rafi-panafody mifandray amin'ny vatana. Ny fihainoana dia singa natokana izay mandalo sy mitantara sy manamafy ny taova amin'ny rafi-pisefoana, ary miasa amin'ny fihainoana amin'ny alalan'ny fifandraisana marina amin'ny taovany.
an-danitra: dia ny fanjakana sy ny vanim-potoanan'ny fahasambarana, tsy voafetra amin'ny fotoana ety an-tany, ary toa tsy misy fiandohana. Izy io dia ny firafitry ny eritreritra sy ny idealy ny fiainana rehetra eto an-tany, izay tsy misy mieritreritra ny fijaliana na
Mety hiditra ao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena ny fahatsapana, satria nesorina avy amin'ny fofon'aina nandritra ny vanim-potoan'ny fandefasana azy izany. Ny lanitra dia manomboka rehefa vonona ilay mpankafy ary manainga ny fofon'ainy. Tsy toy ny fiandohana izany; Toy ny hoe efa nisy hatramin'izay. Nifarana ny lanitra rehefa nandalo ilay mpankafy ary nandrava ny eritreritra tsara sy ny asa soa izay nataony ary nanao izany fony izy teto an-tany. Avy eo ny fahatsapan'ny maso sy ny sofina ary ny tsiro sy ny fofona dia navotsotra avy amin'ny fofom-bika, ary miditra ao amin'ny singan-javatra izay izy ireo no fitenenana ao amin'ny vatana; ny ampahan'ny mpandeha dia miverina ho azy, istence, izay mandra-piverenany ho amin'ny fiverenany manaraka eto an-tany.
Hell: dia toe-batana manokana na toetry ny fijaliana, ny fijaliana, fa tsy ny fiaraha-monina. Ny fijaliana na ny fijaliana dia avy amin'ny ampahany amin'ny fihetseham-po sy ny faniriana izay nosarahina sy nopotehin'ny mpankato teo amin'ny andalany tamin'ny metempsychosis. Ny fijaliana dia satria ny fihetseham-po sy ny faniriana dia tsy manana fomba amam-panao na amin'ny alalan'iza na amin'iza na amin'iza izy ireo no afaka manafaka, na mahazo izay mampalahelo azy, maniry sy maniry. Izany no fijaliany-helo. Na dia tao anatin'ny vatana ara-batana iray teto an-tany aza ireo fahatsapana sy faniriana tsara sy ny faniriana dia nanana ny fotoam-pifaliana sy alahelo izay nifaneraserana nandritra ny fiainany teto an-tany. Fa mandritra ny metempsychosis, ny fizotran'ny purgatorial dia manasaraka ny ratsy amin'ny tsara; ny soa dia mankafy ny fahasambarana tsy misy fitiavan-tena ao amin'ny "lanitra", ary ny ratsy dia mitoetra ao anatin'izany izay mampijaly ny fijaliana, izay ahafahan'ny fihetseham-po sy ny faniriana tsirairay atao ary mahavariana, ka rehefa tafaverina indray izy ireo dia afaka, raha misafidy izy ireo, dia esory ny ratsy ary maka tombony amin'ny tsara. Ny lanitra sy ny helo dia tokony hiaina, fa tsy amin'ny fianarana. Ny tany no toerana ahafahana mianatra amin'ny traikefa, satria ny tany no toeran'ny fisainana sy ny fianarana. Ao amin'ireo fanjakana aorian'ny fahafatesana, ny eritreritra sy ny asany dia toy ny tamin'ny nofy dia mbola velona indray, saingy tsy misy ny fisainana na ny fisainana vaovao.
fandovan: dia heverina amin'ny ankapobeny fa ny toetra sy ny sainy ary ny endriky ny razany dia nafindra sy nandova izany olona izany. Mazava ho azy fa tsy maintsy ho azo antoka izany raha oharina amin'ny fifandraisana amin'ny ra sy ny fianakaviana. Fa ny fahamarinana tena manan-danja dia tsy omena toerana. Izany hoe, ny fahatsapana sy ny fanirian'ny mpijoro tsy mety maty dia mitoetra ao amin'ny vatan'olombelona aorian'ny nahaterahany ary mitondra ny mombamomba azy sy ny toetrany miaraka aminy. Ny lanjany, ny fambolena, ny tontolo iainana ary ny fikambanana dia manan-danja, saingy mifanaraka amin'ny toetrany sy ny heriny manokana dia manavaka azy ireo ny mpikaroka. Ny endrik'ity endrika ity dia mahatonga ny fahatanterahana; ny endrika dia mametraka ny singa mpamorona ary ny rivotra dia mamorona amin'ny endriny manokana ny fitaovana omen'ny renim-pianakaviana, ary aorian'ny fiterahana dia manohy manorina sy mitazona ny endriny manokana ny fofon'aina
amin'ny alàlan'ny dingan'ny fitomboana sy ny taona. Ny mpahazo ny vatan'ny olombelona tsirairay dia mihoatra noho ny fotoana. Ny fofom-panahiny dia mitondra ny tantarany, izay manomboka ny tantara rehetra fantatra.
fanaovana ny marina: dia ny faniriana ny hieritreritra sy hahita zavatra toy ny Fahazavana Mahalala amin'ny fisainana dia mampiseho ireo zavatra ireo raha ny marina ary avy eo dia hiatrehana ireo zavatra ireo ny fanehoana ny Fahazavana Mahalala fa tokony hokarakaraina izy ireo.
fanantenana: dia ny hazavana mety ho an'ny mpandehandeha any amin'ny fiverenany rehetra manerana an'izao tontolo izao; Mitarika na mandaitra amin'ny tsara na amin'ny aretina izy, arakaraka ny fisehon'ilay mpanamboatra; Tsy azo antoka ny fisian'ny sain-kevitra, fa azo antoka kosa rehefa misy fitsipika.
Zanak'olombelona, A: dia singa iray amin'ny singa efatra amin'ireo singa efatra izay noforonina sy nokarakaraina ho toy ny sela sy taova amin'ny rafitra efatra misy ny fahitana efatra, ny sofina, ny tsirony, ny fofona, ary ny fandrindrana sy ny fampiasana azy amin'ny endrika endrika endrika, ny vatana na ny vatan'ny vehivavy; ary, ao anatin'izany ny ampahan'ny mpiditra dia miditra sy miverina ary manamboatra ny biby.
Ny olombelona, ​​Ireo kilasy efatra: Amin'ny fiheverana ny olona dia mizara ho lasa efatra. Ny kilasy manokana izay misy ny tsirairay, dia nieritreritra ny heviny izy; dia hitoetra ao amin'izay itoerany ihany izy; Hiala amin'izany izy ary hametraka ny tenany ao amin'ny kilasy efatra hafa rehefa manao ny eritreritra izay hametraka azy ho ao amin'ny kilasy izay hipetrahany. Ireo kilasy efatra dia: ny mpiasa, ny mpivarotra, ny mpandinika, ny
knowers. Ny mpiasa dia mieritreritra ny hanome fahafaham-po ny fanirian'ny vatany, ny faniriana sy ny fampiononana ny vatany, ary ny fialam-boly na ny fahafinaretan'ny sain'ny vatany. Ny mpivarotra dia mieritreritra ny hanome fahafaham-po ny harena, hividy na hivarotra na hivarotra tombom-barotra, hahazoany harena, hanana harena. Ny mpandinika dia mieritreritra ny hanome fahafaham-po ny eritreriny, ny idealisma, ny hahita, ny asa aman-draharaha na ny zavakanto na ny siansa, ary ny ho sambatra amin'ny fianarana sy ny zava-bita. Ny mpanjower dia mieritreritra ny hanome fahafaham-po ny faniriana hahalala ny antony mahatonga ny zavatra: hahafantarana hoe iza ary inona ary aiza ary amin'ny fotoana sy ny fomba sy ny antony, ary ny hanomezana ny hafa ny zavatra fantany.
olombelona: dia ny fiaviana iombonana sy ny fifandraisan'ny mpankahala tsy mety maty sy tsy mety maty ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ary ny fihetseham-po miavaka amin'ny olombelona amin'io fifandraisana io.
Hypnose, Self-: dia ny faniriana ny hametraka ny tenany ho amin'ny toeran'ny torimaso lalina amin'ny alàlan'ny fihenanam-pitenenana sy fanaraha-maso ny tenany amin'ny tenany. Ny tanjon'ny hipnotisma ho an'ny tenany dia tokony hifehy tena. Ao amin'ny hypnosis ny tenany dia miasa toy ny mpandinika ary koa ny lohahevitra. Heveriny fa izay tiany hatao dia tsy azony atao. Avy eo, niasa ho toy ny mpihatsaravelatsihy, dia nanoro hevitra ny tenany izy mba hamoaka ireo baiko ireo amin'ny tenany rehefa ao anatin'ny torimaso ipnotic. Avy eo, amin'ny soso-kevitra, dia matory izy amin'ny filazany ny tenany fa hatory izy ary farany dia natory izy. Ao anatin'ny torimaso ipnoticika dia mandidy ny tenany izy hanao ireo zavatra amin'ny fotoana sy ny toerana. Rehefa nandidy ny tenany izy, dia niverina tany amin'ny fanjakana nahantony izy. Mifohaza ry zareo fa tokony hatao. Amin'ity fanao ity dia tsy tokony hamita-tena ny tenany, raha tsy izany dia ho sahiran-tsaina izy ary tsy ho afaka hifehy tena.
Hypnotism na Hypnosis: dia toe-javatra mampiavaka ny torimaso vokarina amin'ny lohahevitra iray izay mijaly ny tenany ho hipnotized. Ny lohahevitra dia na mahatonga ny tenany ho ratsy amin'ny hypnotistes, izay tokony ho tsara. Manolotra azy ny lohahevitra
Ny fahatsapana sy faniriana ny fahatsapana sy fanirian'ny mpihatsaravelatsihy ary amin'ny fanaovan'ny mpanolo-tanana ny fifehezana ny fofony sy ny fampiasana ny fahatsapany efatra. Ny hypnotista dia mihinam-bidy ilay foto-kevitra amin'ny fampiasana hery na hery elektrônika amin'ny alalan'ny masony na ny feo sy ny tanan'ny lohahevitra ary amin'ny filazàna imbetsaka izy fa hatory izy ary matory izy. Ny famelana ny soso-kevitra momba ny torimaso dia natory ny foto-kevitra. Nanolotra ny tenany, izy
ny endrika amam-bika ary ny fahatsapany faha-efatra amin'ny fifehezana ny mpihatsaravelatsihy, ny foto-kevitra dia mankatò ny baiko ary manao zavatra izay omen'ny mpihatsaravelatsihy tsy fantany akory izay tena ataony-afa-tsy ny tsy ahafahany manao heloka bevava na manatanteraka azy fahavetavetana raha toa ka tsy manao izany na manao zavatra izy amin'ny fahamatorany. Ny hypnotist dia mihevi-tena ho tompon'andraikitra amin'ny fisamborana olona. Ny foto-kevitra dia tsy maintsy mijaly mandritra ny fotoana lava satria mamela ny tenany hifehy ny hafa. Samy tokony hifehy tena izy ireo mandra-pahafatiny. Avy eo dia tsy hifehy ny hafa izy na hamela ny hafa hifehy azy.
Hypnotist, A: dia iray izay manana ny sitrapony, ny fisainana ary ny fahatokisan-tena ary izay mahomby amin'ny fanararaotana ny olom-peheziny ary mamokatra ny endriky ny hipnotisma ho toy ny fampiharana azy amin'ny fahatakarana.
"Izaho" ho toy ny Identité, The False: dia ny fahatsapana ny fisiana ny maha-izy azy ny maha-izy azy ny maha-izy azy. I-ness dia ny maha-izy azy manokana ny maha-izy azy, ny tsy manan-danja ary ny tsy fiandohana na ny farany amin'ny mandrakizay.
Ny fisainana amin'ny vatana sy ny fahatsapana ny fisian'ilay tena izy, dia manala ny mpino amin'ny finoana fa iray sy mitovy amin'ny vatana sy ny saina izany.
tonga lafatra: dia ny fiheverana ny zavatra tsara indrindra ho an'ny olona iray, ny fisiany, ny atao, na ny fananana.
Identite, ny: dia ny fahatsapan'ny maha-izy azy amin'ny vatany, ny fihetseham-pon'ny tenany ho toy ny taloha tahaka ny taloha ary ny fahatsapana ho amin'ny ho avy. Ny fahatsapana ny maha-izy ny olona iray dia ilaina ary ny sasany amin'ny mpandehandeha amin'ny alalan'ny vatany, noho ny tsy fitovian'ny maha-izy azy ny maha-izy azy ny an'ny Triune Self.
I-hetra: dia ny maha-izy azy, tsy voatery, tsy miova, ary tsy miovaova maharitra amin'ny Triune Self in the Eternal; fa tsy ny fanatrehany, fa ny fanatrehany dia manome fahafahana ny fihetseham-po amin'ny vatan'olombelona mba hieritreritra sy hahatsapa ary hilaza ny tenany ho "izaho" ary hahatsapa ny maha-izy azy tsy miovaova mandritra ny fiainana manova tsy tapaka ny vatany.
tsy fahalalana: dia ny haizina ara-tsaina, ny fanjakana izay misy ny mpandoka-batana, tsy mahalala ny tenany sy ny rariny sy ny antony. Ny fihetseham-po sy ny firehan-kevitry ny fahatsapany sy ny faniriany dia nanakona ny mpandinika sy ny mpampiasa azy.
Raha tsy misy ny fahazavana mahazatra amin'izy ireo dia ao anatin'ny haizina izy. Tsy afaka manavaka ny tenany amin'ny saina sy ny vatana izany.
nofinofy: Ny fahadisoam-panantenana na fahatsaran-tarehy ho an'ny zava-misy, ho toy ny ranomandry ho toerana na seho izay asehony, na lahatsoratra lava ho lehilahy; zavatra izay mamitaka ny fisainana ary miteraka fahadisoana amin'ny fitsarana.
mamoron: dia ny fanjakana izay manome ny endriky ny toe-tsaina ny fisainana sy ny faniriana.
Imagination, Nature-: dia ny fialam-boly tsy mitongilana amin'ny fahatsapana fahatsapana ankehitriny amin'ny fahatsiarovana; Ny fampifangaroana na ny famintinana ireo sary natao tamin'ny fofona-endrika amin'ny fahatsapana amin'ny fahatsiarovana ny fahatsapana mitovy, ary ny fampifangaroan-tena maneho ny tena zava-misy amin'ny fiaramanidina. Ireo fahatsapana mahery vaika ireo dia manery, ary mety handresy ny fisainana.
Incubus: dia endrika fitongilanana tsy hita maso mitady fikirizana na fifandraisana amin'ny vehivavy mandritra ny torimaso. Misy karazany roa ny incubi, ary misy karazany ny karazany. Ny tena mahazatra dia ny tabataba ara-nofo, ny iray hafa dia ny incubus izay miezaka ny manevateva ny vehivavy, toy ny amin'ny antsoina hoe nofy ratsy, izay mety ho toetran-javatra mahatsiravina noho ny tsy fahampian-tsakafo na ny fikorontanana ara-batana. Ny karazana incubus dia miankina amin'ny fahazarana eritreritra sy ny fomba fihetsika mandritra ny fiainany. Ny endriky ny incubus, raha hita maso, dia miovaova amin'ny an'ny anjely na andriamanitra, ho an'ny devoly na hala na lambo.
Instinct in the Animal: dia ny hery mitondra hery avy amin'ny olona izay ao amin'io biby io. Ny fahazavana avy amin'ny olona, ​​mifamatotra amin'ny faniriana, dia mitarika na mitarika ny biby amin'ny ataony, araka ny hevi-teny efatra.
faharanitan-tsaina: dia ny fifandraisany amin'ny zava-drehetra dia mifandray ary manavaka sy mifandray ary mametraka fifandraisana amin'ny zavamananaina tsirairay izay mahatsiaro saina; ary, amin'ny alalan'izy ireo, sy amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny fahatsiarovan-tena, ny faniriany, ny manavaka sy mampifandray ireo singa na vondrona misy singa eo amin'ny fifandraisan'izy samy izy.
Intelligence, An: dia avy amin'ny filaminana ambony indrindra ao amin'ny tontolon'ny zava-drehetra, mifandray amin'ny Triune Self of Man amin'ny Supreme Intelligence amin'ny alalan'ny fahazavana mahatsiaro tena, izay manome azy ny olona ary mahatonga azy hieritreritra.
Fahalalana, Fakan-kevitra: Misy fito: ny fahazavana sy ny fahaiza-manaoko izay mifehy ny sahan'ny afo; ny fotoana sy ny antony manosika ny tontolon'ny rivotra; ny sary sy ny fahaizana maizina eo amin'ny sehatry ny rano; ary ny mpampianatra mifantoka amin'ny sehatry ny tany. Ny fahaiza-manao tsirairay dia manana ny asany manokana sy ny fahefana ary ny tanjona manokana ary mifandray tsy tapaka amin'ny hafa. Ny fahaiza-manaon'ny fahazavana dia mandefa ny hazavana ho an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny Triune Self; ny fotoana
Ny fakioltenana no mahatonga ny fitsipika sy ny fanovana eo amin'ny natiora eo amin'ny fifandraisan'izy samy izy. Ny fakan-tsary dia mampiaiky ny hevitra momba ny endrika amin'ny raharaha. Ny fakan-tsarimihetsika mifantoka dia miorina amin'ny sehatra hafa momba ny lohahevitra misy azy
nitarika. Ny fanabeazana maizina dia manohitra na manome hery amin'ny hafa. Ny tanjom-pampianarana dia manome tanjona sy tari-dalana ho an'ny eritreritra. Ny fakam-panahy I-tena no tena tena ao amin'ny fahaiza-misaina. Ny fakan-kevitra mifantoka dia ilay hany tokana izay mifandray amin'ny vatana amin'ny alalan'ny mpandehandeha ao amin'ny vatana.
Fahalalana, The Supreme: dia ny fetra sy ny farany indrindra fa ny vondrona inteligent dia afaka mandroso amin'ny fahatsiarovan-tena ho vondrona. Ny Tsiambaratelon'ny Fahamarinana dia maneho sy mahatakatra ny Intelligence hafa ao anatin'io sehatra io. Tsy ny mpitondra tsipika hafa, satria ny fahalalana dia mahalala ny lalàna rehetra; lalàna izy ireo ary ny sampam-pitsikilovana tsirairay dia mamolavola ny tenany ary mieritreritra sy miasa araka ny lalàna manerantany. Saingy ny Intelligence Supreme dia manana andraikitra sy fanaraha-maso
ny saha sy ny tontolo rehetra ary mahafantatra ireo andriamanitra sy zavakanto manerana izao tontolo izao.
zavatra manindry mandry: ny fampianarana, ny fandoavam-bola avy ao anatiny; Izy io dia fahalalana mivantana izay mitranga amin'ny antony. Tsy mahaliana ny raharaham-barotra na ny raharaham-pahasalamana, fa amin'ny fanontaniana ara-môraly na ny lohahevitra filôzôfika, ary mahalana. Raha afaka manokatra fifandraisana amin'ny mpampiasa ilay mpihaino, dia mety hanana fahalalana momba ny lohahevitra rehetra izany.
Istence: dia ny fahatsapana sy ny fanirian'ny mpankato, mahatsapa ny tena zava-misy ao aminy, toy ny tenany; tsy amin'ny maha-fisiana azy, fa tsy misy, fa amin'ny alonenany vokatry ny fialany amin'ny fiheverany ny tenany amin'ny nofinofy momba ny natiora.
ny fialonana: dia ny tahotra sy ny alahelo noho ny tsy fahazoana na ny fananana ny zon'ny olona amin'ny fitiavana na ny tombontsoan'ny hafa na ny hafa.
Joyousness: dia ny fanehoana ny fahatsapana sy ny fanirian'ny olona iray izay itokisana.
Justice:dia ny hetsiky ny fahalalahana mifandraika amin'ny lohahevitra hodinihina, ary amin'ny fitsarana no voatonona sy voasoratra ho lalàna.
Karma: dia vokatry ny fihetsika sy fanehoan-kevitra sy faniriana.
Knower, The: dia ny an'ny Triune Self izay manana sy tena ary tena fahalalana, ary amin'ny fotoana sy mandrakizay.
Fahalalana roa ny fahalalana: tena na fahalalana na fahatsapana-na fahalalana olona. Ny fahalalana ny tena momba ny Triune Self dia tsy mety ritra sy tsy azo ovaina ary mahazatra amin'ny mpahafantatra ny Triune Selves. Tsy miankina amin'ny fahatsapana izany na dia ao anatin'izany aza ny zava-drehetra nitranga teo amin'izao tontolo izao; Izany dia mahakasika ny zava-drehetra avy amin'ny vondrona kely natanjaka indrindra ho an'ny Fahalalahana mahatalanjona rehetra an'ny tontolo manerana ny fotoana manontolo ao amin'ny mandrakizay. Izy io dia ny fahalalana marina sy tsy miova avy hatrany amin'ny antsipiriany amin'ny antsipiriany ary amin'ny maha tanteraka tanteraka sy feno.
Ny fahalalana siansa, siansa, na fahalalana olona, ​​dia ny angon-drakitra sy ny endriky ny zava-misy momba ny natiora izay heverina ho lalàna voajanahary, na niainan'ireo mpankafy tamin'ny alalan'ny ratsiny sy ny tsy fahalavorariany. Ary ny fahalalana sy ny fanambarana ny lalàna dia tokony hovaina indraindray.
Fahafantarana ny mpitsidika: no fototry ny fianarana ataon'ny mpino amin'ny fisainana. Ny fahazavana izay navotsotra avy amin'ny toerany ary naverina tamin'ny rivotra, amin'ny fifandimbiasana ny eritreriny, dia tsy voafehy sy tsy azo hinoana, ary noho izany fahalalana; Tsy fahalalana "olombelona" izany.
Fahafantarana ny mpandinika ny tena telo: dia ahitana ny fahalalana rehetra momba ny fitantanana ny lalàna sy ny rariny amin'ny mpandehandeha azy, ary amin'ny fifandraisan'ilay mpankafy amin'ny olona hafa ao amin'ny vatan'olombelona, ​​amin'ny alalan'ireo mpandinika azy.
Fantatry ny mpandinika rehetra ny lalàna. Mifanaraka foana izy ireo ary miaraka amin'ny mpilatsaka an-tsainy amin'ny fitantanana ny anjaran'izy ireo amin'ny mpandray anjara tsirairay ao amin'ny vatan'olombelona. Ny fahalalan'izy ireo ny lalàna sy ny rariny dia manala fisalasalana ary manakana ny mety hisian'ny fitiavan-tena. Ny mpankafy amin'ny vatan'olombelona tsirairay dia mahazo ny anjarany rehefa manao izany. Izany hoe, lalàna sy rariny.
Fahafantarana ny Mpanjon'Ilay Fahaleovan-tena (Self-Knowledge): dia mirakitra sy mamihina ny zava-drehetra ao amin'ny tontolo efatra. Amin'ny maha-fitiavan-tena azy dia fahalalana izany, ary tahaka ny hoe I-ness dia mamaritra azy ary ny maha-izy azy ny fahalalana. Nanompo azy io
fanabeazana ny natiora ho toy ny rafitra natiora. Tao no nahatsiaro tena as Ny asany dia manaraka ny fizotran'ny masombolon'ny natiora. Rehefa nanjary Fahaleovan-tena izy tao amin'ny fahazavana mahataka-javatra ny faharanitan-tsaina tao amin'ny mandrakizay, dia
Ny asa izay nahafantarana azy tamim-potoana dia afaka avy hatrany, tsy voafetra amin'ny fotoana, ao amin'ny Eternal. Ny anaran'ny knee dia mamaritra ny asany tsirairay ary ny maha-izy azy no nahafantarana ilay vondrona, ary fantatry ny maha-izy azy ny fahaiza-manaony ary ny fahalalana ny singa tsirairay toy izany, toy ny amin'ny fotoam-pahavaratra, ary ny fiaraha-miombon'antoka rehetra ao amin'ny Eternal. Izany fahalalana izany dia ampitaina amin'ny mpandinika amin'ny alalan'ny saiko sy ny fitiavan-tena, ary mety ho an'ny mpihaino toy ny fahatsapana araka ny tokony ho izy, ary ho toy ny fisitrihana amin'ny saina.
Fahalalana, Noetic (Ny Tontolon'ny fahalalana): dia mifototra amin'ny atmosfera mampihetsi-po avy amin'ny mpomba ny Triune Selves. Ao dia misy ny fahalalana rehetra momba ny Triune Self rehetra rehetra ary azo ampiasaina amin'ny asa hafa rehetra.
lalàna: dia sora-baventy ho an'ny fampisehoana, vita amin'ny eritreritra sy ny asan'ny mpanao azy na ny mpamorona azy, ary izay mifamatotra ireo izay efa nisoratra anarana.
Lalàn'ny natiora, A: dia ny fihetsika na ny asan'ny singa iray izay mahatsiaro tena ho azy irery ihany.
Lalàn'ny fisainana, Ny: dia ny zava-drehetra eo amin'ny fiaramanidina ara-batana dia ny fanimbana ny eritreritra iray izay tsy maintsy mandanjalanja amin'ilay namolavola azy, araka ny andraikiny sy amin'ny fotoan'ny fotoana, ny toe-javatra
Lalàn'ny fisainana, ny faniriana. Agents of the: Ny olombelona tsirairay dia mpitsikilo ho an'ny tsara na ho amin'ny faharatsiana amin'ny tanjony eo amin'ny fiainana sy amin'ny zavatra heveriny sy izay ataony. Amin'ny zavatra eritreretiny sy ataony dia mifanaraka amin'ny hafa ny teniny. Ny olona dia tsy azo ampiasaina na noterena hanao zavatra mifanohitra amin'ny antony manosika azy, afa-tsy ny nanamafisany ny eritreriny sy ny asany. Avy eo izy ireo dia voatarika hanao asa na fanomezana arak'ireo olona hafa, indrindra rehefa tsy manana izy ireo
tanjona voafaritra tsara eo amin'ny fiainana. Ireo izay manana tanjona dia fitaovana ihany koa, satria, na inona na inona antony, dia mety ho amin'ny tsara na ho an'ny ratsy amin'ny Governemanta amin'izao tontolo izao no ataon'ny mpiasam-panjakana misaina.
ny fianarana: no fototry ny traikefa niainana tamin'ny traikefa tamin'ny fisainana, mba hahafahana manafaka ny fahazavana ary tsy mila averina intsony izany traikefa izany. Ny fianarana dia karazana roa: fahatsapana-ny fianarana ho traikefa, fanandramana, fandinihana ary ny firaketana azy ireny ho fahatsiarovana ny natiora; ary, ny mpiana-pianatra dia vokatry ny fisainan'ny tenany ho fahatsapana sy faniriana ary ny fifandraisan'izy ireo. Ny antsipirian'ny fianarana fahatsiarovana dia mety haharitra amin'ny fiainan'ny vatana fa ho very aorian'ny fahafatesana. Ny zavatra nianaran 'ilay mpihaino momba ny tenany ho tsy mitovy amin' ny vatana dia tsy ho very; izay hanaraka ny mpankatony amin'ny fiainany eto an-tany noho ny fahalalany manokana.
Liar, A: dia milaza ny marina izay fantany fa tsy izany, tsy marina.
Liberty: dia tsy manan-kialofana amin'ny fampidirana am-ponja na ny fanandevozana, ary ny zon'ny tsirairay hanao izay tiany, raha mbola tsy manelingelina ny zo sy ny safidy iray hafa ny iray.
Life: dia singa fitomboana, fitateran'ny hazavana amin'ny endriny. Ny fiainana dia miasa ho toy ny mpizara eo anelanelany etsy ambony sy eo ambany, ka mitondra ny vola ho any amin'ny tondra-drano ary hamerenana amin'ny laoniny ary hanova ny vidiny ho lasa fanatsarana. Ny voa rehetra dia misy vondron'olona. Ao amin'ny olombelona ny fofon'aina.
fiainanaHo an'ny fahatakarana kritikana iray): dia kely na ohatran'ny nofy ratsy, izay toa tsy misy azo antoka fa misy tampotampoka tampoka na lava be dia be, ary miharihary kokoa ny zava-mitranga mahatalanjona sy mampiavaka azy-dia ny phantasmagoria.
Light: Izany no mahatonga ny zavatra hita maso, saingy tsy hita maso. Izy io dia ahitana ireo singa kintana na tara-pahazavana na ny volana na ny zaridaina, na ny fampifangaroan-tsolika na ny fanamafisana azy ireo ho toy ny herinaratra na ny fandefasana gaza, fluids, na vatana.
Fahazavana, azo havaozina sy tsy azo resena: dia ny fahazavana mahazatra ny faharanitan-tsaina no nindramina tamin'ny Triune Self, izay ampiasain'ny mpitsabo ao amin'ny fisainany. Ny fahazavana azo ampiasaina dia ny zavatra ataon'ilay mpandeha amin'ny natiora amin'ny eritreriny sy ny asany, ary ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fampiasana azy mandrakariva. Ny Fahazavana tsy hay lazaina dia ny zavatra naverin'ilay mpikarakara ary tsy azo resahina, satria nandanjalanja ny eritreritra izay nahatonga ny fahazavana. Ny fahazavana izay tsy azo resahina dia naverina amin'ny rivotra iainana iray ary afaka mahazo izany fahalalana izany.
Fahazavana, mahatsiaro: dia ilay hazavana izay omen'ny Triune Self avy amin'ny Intelligence. Tsy ny natiora na ny fisainan'ny natiora, na izany aza, rehefa alefa any amin'ny natiora sy ny mpiara-miasa amin'ny vondrona natiora, hita fa miharihary ny natiora
tsaina, ary mety hantsoina hoe Andriamanitra izy. Raha, rehefa mieritreritra, dia mihodina sy mihazona zavatra iray ny Fahazavana Mahalala, dia maneho izany zavatra izany ho toy ny hoe. Ny Fahazavana Mahalala koa dia Fahamarinana, satria ny Fahamarinana dia mampiseho zavatra tokony ho izy
tahaka azy ireo, tsy misy safidy na fitsarana an-tendrony, tsy misy fanovana na fitarainana. Ny zava-drehetra dia ampahafantarina azy rehefa mihodina sy mitazona azy ireo. Fa ny Fahazavana Mahalala kosa dia voavolavola sy voamariky ny eritreritra rehefa manandrana ny fahatsapana sy faniriana
mba hieritreritra, noho izany ny olombelona dia mahita zavatra izay tadiaviny, na amin'ny ambaran'ny Fahamarinana miovaova.
Fahazavana ao amin'ny labiera, Potential: Raha misy olona iray manao ny adidy tsy an-kijanona, tsy an-tendrony, ary mahafinaritra satria adidiny, fa tsy noho ny tombotsoany na ny tombony azony na ny fanesorana azy, dia mandanjalanja ny eritreriny izay nanao ireo adidy ireo ny ny andraikitra, ary ny fahazavana izay mamotsotra azy rehefa mandanjalanja ny fisainana dia manome ny heviny vaovao amin'ny fifaliana amin'ny fahafahana. Mahatonga azy ho takatra amin'ny zavatra sy zavatra tsy azony taloha izany. Rehefa manohy manafaka ny Fahazavana izy izay nafeniny tamin'ireo zavatra niriny sy tadiaviny, dia nanomboka nahatsapa sy nahatakatra ny mety ho fahazavana ao aminy izy ary izay tena hazavaina marina rehefa lasa Fahalalana.
Fahazavan'ny natiora: dia ny fihetseham-po toy ny mamirapiratra, mamirapiratra, mamirapiratra na mamirapiratra ny singa mifangaro amin'ny natiora, ho an'ny Light Conscious izay nalefan'ny mpankafy amin'ny vatan'olombelona.
Link Unit, A breath-: dia mitazona sy mihazona ireo singa efa mihetsiketsika manjavozavo, ary ny rohy izay ahafahan'ny fofonaina mifandray amin'ny vatana miaina ao amin'ny sela.
Link Unit, A Life-: dia manangona sy mitazona singa mahavariana misy lanjany, ary ny rohy izay ahafahan'ny fiainana mifandray amin'ny rohy vita amin'ny rohy sy ny fifandraisana amin'ny rivotra
Link Unit, A Form-: dia mihazona sy mitazona singa mpikoran'ny zava-mahadomelina, ary mifandray amin'ny sela-rohy sy ny singa mifandraika amin'ny fiainana ao amin'ny sela.
Link Unit, A Cell-: dia mihazona sy mitazona ireo singa mpikorontan-kiran'ny zava-matanjaka, ary amin'ny alalan'izany dia mifandray amin'ny sela hafa ao amin'ny taova na ampahany amin'ny vatana izay misy azy io.
"Very fanahy," A: Ny antsoina hoe "fanahy very" dia tsy ny hoe "fanahy", fa ampahany amin'ny anjara andraikitra, ary tsy maharitra izany, fa fotoana fohy monja, very na nesorina tamin'ny fanavaozana azy sy ireo ampahany hafa amin'ny mpikarakara. Izany dia mitranga, raha ny iray tamin'ireo tranga roa, ny ampahany ny mpankafy dia nanohy nandritra ny fotoana lava nandritra ny fotoana lava be dia be ny fitiavan-tena ary nampiasa ny fahazavana nampidirina tao anatinà hosoka, vono olona, ​​faharavana, na habibiana amin'ny hafa ary lasa fahavalon'ny olombelona. Avy eo dia nesorina ny Fahazavana ary tsy misy intsony ny anjaran'Ilay; Mialoka ao amin'ny efitra fisakafoanana amin'ny tany izy mba hampijalijaly mandra-pahatapitry ny tenany, ary mety hiverina eto an-tany izy aorian'izay. Ny tranga faharoa dia rehefa nandao ny Fahazavana tamin'ny alalan'ny fizahozahoana fahafinaretana, fahafinaretana, zava-mahadomelina sy zava-mahadomelina ny ampahan'ny mpankahala iray, ka lasa adala tsy misy fanafany. Avy eo dia mihodina amin'ny efitrano iray eto an-tany io ampahany io. Eo sisa dia havelany hanohy ny fisiany izy ireo. Amin'ny toe-javatra roa, ny fisotroan-dronono dia natao ho an'ny fiarovana ny hafa, ary koa ny azy manokana.
Love: Ny firaisana tsikombakomba amin'ny alalan'izao tontolo izao; ho an'ny mpankafy eo amin'ny olombelona, ​​dia ny fahatsapana sy ny faniriana ary amin'ny maha-hafa azy sy amin'ny maha-izy azy ary ny faniriana sy ny fahatsapana ho an'ny tenany amin'ny maha-hafa azy.
Ny fitiavana ao amin'ny mpankafy: dia ny toetry ny sendikà mifandanja ary fifandraisana eo amin'ny fahatsapana sy ny faniriana, ka ny tsirairay no mahatsapa sy maniry ny ho azy sy ny tenany ary ny iray hafa.
Mandainga sy tsy fahamendrehana: Ny faniriana ny tsy fahamarinan-toetra sy ny manda dia singa miavaka roa; Miaraka izy ireo. Izay misafidy ny ho tsy marina sy mandainga dia olona iray izay niaina nandritra ny fotoana lava tamin'ny alalan'ny fiainana dia tsy nahatakatra ny zavatra tahaka azy
ary nandika ny zavatra hitany. Nahita indrindra ny voka-dratsin'ny olona indrindra izy ary niaiky fa ny olona rehetra dia mpandainga sy tsy manao ny tsy marina, ary ireo izay matetika no mino fa marina sy marina dia hentitra fotsiny mba hanarona ny tsy fahamarinany sy hanafina ny laingany. Io famaranana io dia miteraka fankahalana sy valifaty ary tombontsoa manokana; ary izany dia lasa fahavalon'ny olombelona, ​​ho toy ny mpanao heloka bevava na ho malina
ary ny teboka mitandrina amin'ny hafa noho ny tombotsoany manokana. Na dia izany aza, ny ozona lehibe ho an'izao tontolo izao dia mety ho lasa iray, ny eritreriny ho toy ny anjarany dia hanambara azy ho amin'izao tontolo izao sy ho an'ny tenany. Ho fantany fa ny fahamarinan-toetra sy ny fahamarinan'ny fisainana sy ny asa dia mampiseho ny làlan'ny Fahalalahana momba ny tena.
lolompo:dia ny fanirian-dratsy noho ny fanahy ratsy sy ny fikasan-dratsy hanimba, hampisy fijaliana; fahavalo hanao asa tsara sy sitrapo.
fomba: Ny fanao tsara dia manana ny toetran'ny mpikarakara; Mivoatra izy ireo, fa tsy natao grefy. Ny polisy ambonimbony kokoa dia tsy manafina ny toetra voajanahary amin'ny fomba tsara na ratsy, na inona na inona mety ho toeran'ny mpiasa eo amin'ny fiainana.
Matter: dia ny votoatin'ny fihetsiketsehana tsy misaina toy ny natiora, ary, izay mandroso ho tarika mahagaga toy ny Triune Selves.
izay midika hoe: dia ny fikasana amin'ny hevitra iray.
Medium, A: dia teny ankapobeny izay midika hoe fantsona, fitaovana, na entana. Eto no ampiasaina hilazàna ny olona iray izay mibaribary sy mamelatra ny vatana manjelatra na astral izay manintona ny iray amin'ireo karazan-javamaniry, elemental, na mpirenireny ao anatin'io taorinan'ny fahafatesana io ary mitady ny velona. Ny fampitam-baovao dia toy ny fomba fifandraisana eo amin'ny olona toy izany sy ny mpankafy amin'ny vatan'olombelona.
Memory: dia ny famokarana ny fahatsapana amin'ny zavatra izay tsapany. Misy karazana fahatsiarovana roa: fahatsiarovan-tsaina, ary fahatsiarovana. Ny fahatsiarovana-fahatsiarovana dia misy kilasy efatra: fahatsiarovana mijery, fahatsiarovana fahatsiarovana, tsiaro tsiro, ary fofom-pahatsiarovana. Ny taova tsirairay avy amin'ireo fahatsapana efatra dia natao handefa ny fahatsapana ny singan'antok'izany ny solontenany, ary ny famindrana ny fahatsapana ho an'izay voasoratra ao ny tsindrimandry, ary ny famerenana azy ireny; Ao amin'ny olombelona, ​​dia endrika fanehoana izany. Ny famokarana ny fahatsapana dia fahatsiarovana.
Memory, Doer-: dia ny fanorenana ny fanjakana ny fahatsapany sy ny faniriany ao amin'ny vatany ankehitriny, na amin'ny iray amin'ireo vatana teo aloha izay niaina teto amin'ity tany ity. Ny mpankafy dia tsy mahita na mandre na manandrana na manitra. Ny fihetseham-po, ny feo, ny fofona ary ny fofona izay mahavariana ny fofona dia mamaly ny fahatsapana sy ny fanirian'ny mpankahala ary mametraka alahelo na fahafinaretana, fifaliana na alahelo, fanantenana na fahatahorana, fifaliana na haizim-pito. Ireo fahatsapana ireo dia mahatsiaro-fahatsiarovana ireo toe-javatra mampihetsi-po na ny fahaketrahana izay niainany. Misy karazany efatra ny fahatsiarovan-tena: ny psycho-physique, izay fihetseham-po amin'ny fahatsapana-ary-faniriana ny hetsika ara-batana amin'izao fiainana izao; fahatsiarovan-tsaina, izay fanehoan-kevitra
ny fahatsapana sy ny faniriana ny toerana sy ny zavatra, na noho ny fanoherana, noho ny toe-javatra mitovitovy amin 'ny fiainana teo aloha; pahatsiarovana ara-tsaina, izay mahakasika ny tsara na ny ratsy na ny famahana ny olana ara-tsaina na
ny fametrahana toe-javatra tampoka na tsy ampoizina amin'ny fiainana; ary fahatsiarovana psycho-noetika, izay mahakasika ny fahalalana ny maha-izy azy, rehefa tsy hita intsony ny fotoana ary ny mpankafy dia mahatsapa ny fisarahana aminy amin'ny maha-izy azy tsy manam-potoana
na inona na inona fiainana sy fahafatesana izay efa nodimandry.
Memory, Sense-: dia midika hoe (a) ny taova amin'ny maso, toy ny fakantsary izay halain'ny sary; (b) ny fahatsapana ny fahitana izay ny fahitana mazava sy ny fifantohana dia natao; (c) ny ratsy na ny takelaka izay tokony hampiaiky ny sary ary avy eo tokony hamerina ilay sary; ary (d) ilay manao ny fifantohana sy mandray ny sary. Ny taova eo amin'ny maso dia fitaovana mekanika ampiasaina amin'ny fahitana. Ny fahitana dia singa natokana ho an'ny natiora izay nampiasaina hampitana ny fahatsapana na ny sary mifantoka amin'ny endrika endrika fofona. Ilay mpahita dia ilay mpahita izay mahita ny sary mifantoka amin'ny endriny. Ny famokarana na ny fahatsiarovana an'io sary io dia novolavolaina sy novolavolaina tamin'ny alalan'ny fifaneraserana amin'ny zavatra tokony hotsaroana. Ny fanao ara-tsaina iray hafa dia manelingelina na misakana ny famerenana na tsiaro mora. Tahaka ny fahatsapan'ny maso sy ny taovany amin'ny fahitana, toy izany koa ny fihainoana sy ny tsiro ary ny fofona, ary ny famokarana azy ireo ho fahatsiarovana. Ny fahitana dia ny mijery sary na sary; ny fihainoana, ny fahatsiarovan-tenan'ny haino aman-jery; ny fanandramana, ny fahatsiarovana mamy; ary ny fofona, ny fahatsiarovan-tenan'ny olitra.
Toe-tsaina sy toe-tsaina ara-tsaina:Ny toe-tsain'ny olona dia ny fomba fijery ny fiainana; Toy ny atmosfera miaraka amin'ny fikasana ankapobeny ny hanao na hanao na hananana zavatra iray. Ny toetrany ara-tsaina no fomba iray manokana sy midika hoe manao zavatra na manao na inona na inona zavatra iray, izay tapa-kevitra sy tontosaina amin'ny fisainana.
Mental Operations: Ny fomba na fomba na fomba fiasan'ny iray amin'ireo saina telo ampiasain'ny mpitsabo.
Metempsychosis: dia ny vanim-potoana taorian'ny nandaozan'ilay mpangataka ny Hall of Judgment sy ny endrika fofona, ary miditra sy mandalo amin'ny dingan'ny fandiovana, izay manasaraka ny faniriany izay mahatonga ny fijaliana, amin'ny faniriana tsara kokoa izay mahafaly azy. Mifarana ny metempsychosis rehefa vita izany.
Mind: dia ny fikarakarana zavatra manan-tsaina. Misy hevitra fito, izany hoe karazana fisainana telo avy amin'ny Triune Self, miaraka amin'ny fahazavan'ny intelligence, -tsy iray izy ireo. Ny karazany fito dia tokony hampiharina araka ny fitsipika tokana, izany hoe, tsy mitazona ny fahazavana tsy mibanjina ny foto-pisainana. Izy ireo dia: ny sain 'ny fahamendrehako sy ny sain' ny fitiavan 'ny mpampiasa; ny sain 'ny fahamarinana sy ny sain' ny fisainan 'ny mpandinika; ny sainan'ny fahatsapana sy ny eritreritry ny fanirian'ny mpankato; ary ny toe-tsaina izay ampiasain'ny mpankafy ny natiora, ary ho an'ny natiora ihany.
Ny teny hoe "saina" dia ampiasain'io fomba fiasa io, na zavatra atao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny ahoana. Teny ankapobeny eto izany ho an'ireo fanahy fito, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia avy amin'ny antony ilan'ny saina amin'ny Triune Self. Ny fisainana dia ny fihazonana ny fahazavana mahazatra amin'ny resaka fisainana. Ny saina ho an'ny fahamendrehana sy ny saina ho an'ny fitiavan-tena dia ampiasain'ny roa tonta amin'ny mpampiasa ny Triune Self. Ny saina amin'ny fahamarinana sy ny sain-kevitra dia ampiasain'ny mpandinika ny Triune Self. Ny fahatsapana sy ny faniriana ary ny saina dia tokony hampiasain'ny mpankafy: ny roa voalohany dia ny manavaka ny fahatsapana sy ny faniriana avy amin'ny vatana sy ny natiora ary ny fananana azy ireo eo amin'ny sendikà mirindra; Ny vatana dia ampiasaina amin'ny alalan'ny fahatsapana efatra, ho an'ny vatana sy ny fifandraisany amin'ny natiora.
Mind, The Body-: Ny tena tanjon'ny vatana dia ny fampiasana ny fahatsapana sy ny faniriana, hikarakara sy hifehy ny vatana, ary amin'ny alalan'ny vatana hitarika sy hifehezana ireo teboka efatra amin'ny alalan'ireo fahatsapana efatra sy ireo taova ao amin'ny vatana. Ny saina dia tsy afaka mieritreritra afa-tsy amin'ny fahatsapana ary amin'ny fomba voafetra amin'ny toe-tsaina sy ny saina. Raha tokony hifehezany, ny saina dia mifehy ny fahatsapana sy ny faniriana ka tsy afaka manavaka ny tenany amin'ny vatana izy ireo, ary ny saina dia manjaka ny fisainany fa voatery hieritreritra izy ireo amin'ny heviny fa tsy teny mifanentana amin'ny fahatsapana sy faniriana.
Mind, The Feeling-: dia ny fahatsapana fiheverana, araka ny andraikitra efatra. Ireo dia ny fahatsapana, ny fisainana, ny famolavolana, ary ny tetikasa. Saingy raha tokony hampiasa izany izy ireo amin'ny famotsorana ny tenany amin'ny fanandevozana amin'ny natiora, dia voafehy amin'ny alalan'ny saina izy ireo amin'ny alalan'ny toe-javatra efatra: ny maso, ny sofina, ny tsiro ary ny fofona.
Mind, The Desire-: Ny faniriana dia tokony hampiasaina hananatra sy hifehy ny fahatsapana ary ny tenany; mba hanavaka ny tenany ho faniriana avy amin'ny vatana izay misy azy; ary, hitondra ny fiombonana amin'ny tenany amin'ny fahatsapana; Izy io kosa dia namela ny tenany ho ambany fanaraha-maso sy hifehezan'ny saina amin'ny fanompoana ho an'ny saina sy ho an'ny zavaboahary.
fitondran-tena: dia tapa-kevitra fa ny fihetseham-po sy ny fanirian'ny olona dia tarihin'ny feon'ny fieritreretana tsy misy feo ao am-pony momba ny zavatra tsy tokony hatao, ary amin'ny alalan'ny fitsaràna ny antony, ny amin'izay tokony hatao. Avy eo, na dia eo aza ny fihenan'ny saina, ny fitondran 'ny olona iray dia tsotra sy marina, ho fanajana ny tena sy ny fijerena ny hafa. Ny toe-tsain'ny olona iray dia ny fiavahan'ny toe-tsain'ny saina.
miafina: dia ny finoana na ny ezaka amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fisaintsainana na amin'ny fahatsapana ny akaiky, ny fisiana na ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny mystika dia avy amin'ny firenena sy ny fivavahana ary ny sasany tsy manana fivavahana manokana. Ny fomba amam-panao na ny fomba amam-panao dia miovaova amin'ny fahanginana amin'ny mangina amin'ny fampiasana herisetra ara-batana sy fanarabiana ary avy amin'ny solontenan'ny tsirairay amin'ny fihetsiketseham-bahoaka. Ny misterika dia matetika mahitsy amin'ny fikasany sy ny zavatra inoany ary miaina ao anatin'ny fanoloran-tenany. Mety hipoitra tampoka ao anaty haavon-koditra izy ireo, ary hidina any amin'ny halalin'ny hakiviana; Mety ho fohy na maharitra ny zavatra niainany. Saingy ireo traikefan'ny fahatsapana sy ny faniriana ihany. Tsy vokatry ny fisainana mazava izy ireo; Tsy mahalala izy ireo. Ny heverin'izy ireo ho fahalalana an 'Andriamanitra na ny akaiky azy dia mifamatotra amin'ny zavatra hita maso, mandre, manandrana na mamofona, izay mahatsapa fa tsy ny Tenany na ny Intelligence.
Nature: dia masinina iray avy amin'ny totalin'ny vondrona tsy misaina; ireo singa izay mahatsiaro fotsiny ny andraikiny.
tsy maintsy: dia anjaranao, fihetsika mandresy lahatra, matetika avy hatrany, izay tsy misy afa-mandositra ny andriamanitra na ny lehilahy.
Noetic: Ny fahalalana na ny fifandraisana amin'ny fahalalana.
Number: dia iray, iray manontolo, toy ny faribolana, izay ahitana ny isa rehetra.
Numbers: dia ny foto-kevitry ny maha-izy azy, amin'ny tsy fitoviana sy ny fifandraisana amin'ny firaisana, Oneness.
One: dia singa iray, firaisam-pirenena na manontolo, ny niandohana sy ny fampidirana ny isa rehetra amin'ny ampahany azy, amin'ny fanitarana na ny finiavana.
maha iray: dia ny fifandraisana marina amin'ny fitsipika sy ny ampahany rehetra
Opinion: dia fanamarihana ny fitsarana aorian'ny fandinihana ny lafiny rehetra amin'ny foto-kevitra voatanisa.
Opportunity: dia ny fotoana na ny toe-javatra mety tsara na ny toerana hanaovana asa mba hanatanterahana ny tanjona rehetra sy izay tena mahakasika ny filàna na ny hetahetan'ny olona.
Pain: dia toe-javatra mampihetsi-po mahonena toy ny sazy amin'ny fisainana diso na atao, ary ny fampahafantarana misahana ny fahatsapana sy faniriana hanala ny antony.
Passion: dia ny hatezerana amin'ny fihetseham-po sy ny faniriana momba ny zavatra na ny olom-pehezina.
Faharetana: dia tony sy mitandrina amim-pitandremana amin'ny fanatanterahana ny faniriana na ny tanjona.
Vatana ara-batana tonga lafatra: dia ny fanjakana na ny toe-javatra izay ny farany, ny tanteraka; izay tsy misy na inona na inona mety ho very, na izay zavatra azo ampiana. Toy izany ny vatana ara-batana tsy manam-paharoa amin'ny vatan'ny Triune Self ao amin'ny faritra
toetra: dia ny vatan'ny olombelona, ​​ny saron-tava, ao anatin'izany ary amin'ny alalan'ilay mpihira tsy manam-paharoa amin'ny faniriana sy ny fihetseham-po no mieritreritra sy miresaka ary miasa.
tena tafahoatra: dia fihetsika ara-tsaina vokatry ny fijerena na ny finoana fa ny fanirian'ny olombelona dia tsy mety afa-po; fa ny vahoaka sy izao tontolo izao dia tsy miaraka; ary, tsy misy zavatra tokony hatao momba izany.
Plan: dia izay maneho ny fomba na ny fomba ampiasana ny tanjona.
fahafinaretana: dia ny fizotran'ny fahatsapana mifanaraka amin'ny eritreritra, ary ny fahafinaretana amin'ny fahatsapana sy ny faniriana.
Poetry: dia ny fahaiza-mamorona ny hevitry ny eritreritra sy ny rhythm ho endrika na teny fahasoavana na fahefana.
Hevitra, A: dia izay tsy misy fiheverana fa avy amin'iza ny maodelim-bidy. Ny teboka dia ny fiandohan'ny zavatra rehetra. Ny fisehoan-javatra tsy hita maso sy ny fisehoana dia zara raha misy. Ny endriky ny tsy miseho dia miseho amin'ny teboka iray. Ny fisehoany dia miverina amin'ny tsy fisian'ny fisainana amin'ny alàlan'ny teboka iray.
Poise: dia ny toetry ny mandanjalanja, ny fitoviana amin'ny saina sy ny fanaraha-maso ny vatana, izay heveriny fa mahatsapa sy mahatsapa ary miara-milamina, tsy manelingelina amin'ny toe-javatra na ny toe-javatra, na amin'ny eritreritra na ny asan'ny hafa.
ny fananany: dia toy ny sakafo, fitafiana, fialofana, ary fomba hananana ny toetra maha-olona eo amin'ny toerany eo amin'ny fiainana; Ankoatra ireo, ary amin'ny endriny hafa, dia fandrika, fikarakarana, ary gadra.
Hery, mahatsiaro: dia faniriana, izay mitondra fiovana ao aminy, na mahatonga fiovana amin'ny zavatra hafa.
Pranayama: dia teny Sanskrit izay mety handika ny hevitry ny maro. Azo ampiharina amin'ny ankapobeny fa ny fifehezana na ny fifehezana ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitsaboana, ny fitsaboana, ny fimenomenonana, ny fampiatoana, ary ny fitsaboana indray ho an'ny fotoana maromaro toy izany na mandritra ny fe-potoana maromaro. Ao amin'ny Yoga Sutras ao Patanjali, pranayama dia nomena ny ampahefatry ny dingana valo na dingana yoga. Ny tanjon'ny pranayama dia lazaina fa fanaraha-maso ny prana, na fanaraha-maso ny saina. Na izany aza dia mampisafotofoto sy mandresy ny tanjona ny fampiharana ny pranayama, satria ny fisainana dia tarihina na amin'ny fofona na amin'ny prana, ary ny fijanonana amin'ny fofonaina. Ny fisainana sy ny fijanonana amin'ny fisefoana dia manakana ny fisainana marina. Ny fahazavana mahazatra ampiasaina amin'ny fisainana-hampahafantarana ny mpandinika ny foto-pisainana an-tsain-dry zareo-dia tsy ho afaka hivezivezy amin'ny fijanonana ny fivalanana ara-boajanahary sy ara-dalàna. Ny fahazavana mahazatra dia miditra amin'ny tsy fisian'ny fifandimbiasana roa eo anelanelan'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fipoahana ary ny fipoahana sy ny tsy fahampian-tsakafo. Ny fanakanana dia manohy ny hazavana. Noho izany, tsy misy hazavana; tsy misy fisainana marina; tsy misy yoga na sendikà; Tsy misy tena fahalalana.
tian'ny: dia ny fankasitrahan'ny olona, ​​toerana na zavatra amin'ny fahatsapana sy ny faniriana, tsy misy fiheverana ny tsara na ny antony; Manakana ny fahitana ara-tsaina izany.
fanavakavahana: dia mitsara olona, ​​toerana na zavatra iray izay manohitra ny fihetseham-po sy ny faniriana, tsy mihevitra, na tsy miankina, ny marina na ny antony. Ny fanavakavahana dia manakana ny rariny sy ny hitsiny.
Toro lalana: dia ny substrate izay ny fitsipika rehetra dia ny maha-izy azy ary amin'ny alalan'izany no ahafahany manavaka azy ireo.
Fitsipika, A: dia io fototra io amin'ny zavatra iray, izay nahatonga azy io ho toy izany, ary araka izay mety hahafantarana ny toetrany amin'ny toerana misy azy.
Progress: dia mitombo hatrany ny fahafaha-mitandrina, ary amin'ny fampiasana tsara ny zavatra iray izay mahatsiaro tena.
sazy: no sazy noho ny asa ratsy. Tsy natao hampijaly ny fijaliana sy ny fijaliana amin'ny saziana iray; Natao hampianarina ilay sazina iray izay tsy afaka manao ny ratsy izy raha tsy mijaly, tsy ela na tara, ny vokatr'ilay ratsy.
Zava-kendreny: dia ny tanjona mitarika amin'ny ezaka amin'ny zavatra mivantana, izay izay ezahan'ny olona iray, na ny foto-kevitra faran'izay hahafantarana azy; Izany no tanjaky ny hery, ny fikasana amin'ny teny na ny atao, ny fanatanterahana ny eritreritra sy ny ezaka, ny fahataperan'ny fahombiazana.
Quality: dia ny halehiben'ny fahaizana amam-pahalalana amin'ny natiora sy ny asan'ny zavatra iray.
Zava-misy, A: Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza izay mahatsapa na mahatsapa, ao amin'ny fanjakana na eo amin'ny fiaramanidina izay tsy misy fiheverana na fifandraisana amin'ny zavatra hafa ankoatra izany.
Zava-misy, havana: ny fitohizan'ny zava-misy na ny zavatra ary ny fifandraisan'izy samy izy, eo amin'ny fanjakana sy ny fiaramanidina izay tazonina.
Zava-misy, Ultimate: Fahamarinana, tsy manan-kialofana ary tsy misy dikany; Ny Fanatrehan'ny fahatsiarovan-tena ao anaty sy amin'ny alalan'ny tarika tsirairay avy ary ny Triune Self and Intelligence mandritra ny fotoana sy toerana ao amin'ny mandrakizay, mandritra ny fitohizan'ny fivoarany tsy tapaka amin'ny ambaratonga ambony kokoa amin'ny fahatsiarovan-tena mandra-pahatongan'ny iray sy ny fahatsiarovan-tena .
Ny fanjakan'ny faharetana, Ny: dia mampivelatra ny fasanamagoria eto amin'ity tontolon'ny olombelona ateraky ny fahaterahana sy ny fahafatesana ity, toy ny tara-pahazavan'ny masoandro ny rivotra iaiantsika. Saingy ny olombelona mety maty dia mahatakatra sy mahatakatra ny fanjakan'ny lanitra fa tsy mahita na mahatakatra ny masoandro. Ny antony dia ny tsy fahitana ny fahatsapana sy ny fahatsapana, ary tsy mifantoka amin'ny zavatra amin'ny fotoana sy ny fahafatesana tsy misy fiantraikany. Fa ny fanjakan'ny fahamendrehana dia miaro sy mitahiry ny tontolon'ny olombelona amin'ny fandringanana tanteraka, toy ny hazavan'ny masoandro ny fiainana sy ny fivoaran'ny zava-manan'aina. Ny mpahita saina ao amin'ny vatany dia hahatakatra sy hahatsapa ny fanjakan'ny faharetana rehefa mahatakatra sy manavaka ny tenany amin'ny vatany miova izay iriany sy tsapany ary eritreriny izy.
antony: ny mpandinika, ny mpitsara ary ny mpitsara; ny mpitantana ny fitsarana ho toy ny asan'ny fahalalana araka ny lalàn'ny fahamarinana. Izany no valin'ny fanontaniana sy ny olana, ny fiandohana ary ny fiafaran'ny fisainana, ary ny torolàlana ho an'ny fahalalana.
Re-misy: dia ny ampahany anjara izay mamela ny ampahany hafa amin'ny tenany, amin'ny fisainana, ny miala amin'ny tenany, amin'ny natiora, rehefa voaomana ny vatan'olombelona ary efa vonona ny hiditra sy haka ny toeram-ponenana ao amin'izany vatana izany. Ny vatan'ny biby dia efa vonona amin'ny fampiofanana azy mba hampiasa ny sainy, ny mandeha, ary hamerina ny teny ampiasaina hampiasaina. Izany dia toy ny parrot, raha mbola biby izy. Lasa olombelona izy raha vao mahira-tsaina, araka ny asehon'ny fanontaniana apetraky ny fanontaniana, ary ny zavatra azony.
fiterahana indray: dia ny famerenana ny taranaka, ny fanabeazana ny vatana. Midika izany fa: ny sela mpikatroka ao amin'ny vatana dia ampiasaina mba tsy hitondra vatana hafa eto amin'izao tontolo izao fa hiova sy manome lamandy vaovao sy ambony kokoa amin'ny vatana. Io no iray amin'ny fananganana indray ny vatana amin'ny vatana tsy manan'olon-tokana na vatana ho lasa vatana feno sy lavorary tsy misy firaisana ara-nofo, izay tanterahana amin'ny tsy firaharahiana hevitra momba ny firaisana ara-nofo na ny fiheverana momba ny firaisana ara-nofo; ary noho ny toe-tsaina miorina maharitra mba hamerenana indray ny vatany ho an'ny fanjakana tonga lafatra izay nahatongavany.
fifandraisana: dia ny fiaviana sy ny fizarana ao anatin'ny firaisam-pahaizana farany izay mifandray amin'ny singa natokana ho an'ny natiora sy ny vondrona intelligence ary ny intelligence.
fivavahana: dia ny fatoran'ny singa iray na efatra amin'ny endriky ny natiora, toy ny afo na ny rivotra, na ny rano na ny tany, amin'ny alalan'ny rantsambatan'ny maso, ny sofina, ny tsiro na ny fofona, izay mihazona na mamatotra ny mpanao asa tanana ao amin'ny vatana. toetra. Izany dia atao amin'ny eritreritra sy ny asa amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana ary amin'ny fanatitra dorana sy ny hira ary ny fofona na ny rano ao anaty rano ary ny emboka manitra amin'ny andriamanitra iray na maromaro amin'ny singa afo, rivotra, rano na tany.
Andraikitra: miankina amin'ny fahafahana mahafantatra ny tsara amin'ny ratsy; Ny fiankinana sy ny fitokisana izay azo ametrahana ny olona iray hanao ny zavatra rehetra izay nataony taloha sy ankehitriny, na hanao ny ho avy, ho tompon'andraikitra amin'ny. Ny andraikitr'izy ireo dia mitaky ny fahitsim-po sy ny fahamarinana, ny voninahitra ary ny fahatokisana sy ny toetra hafa izay mampiseho toetra mahery sy tsy misy tahotra, izay azo itokisana kokoa noho ny hoe fifanarahana ara-dalàna ny teniny.
fitsanganana amin'ny maty: manana dikany roa. Ny voalohany dia ny fanangonana ireo lafin-javatra efatra sy ireo mpamolavola ny vatana tamin'ny lasa, izay natokana ho an'ny natiora taorian'ny nahafatesany, ary ny fanorenana amin'ny endrika endrika aingam-panahy vaovao iray mba hanorenana ny trano miasa amin'ny fiverenany ety an-tany. Ny dikan'ny faharoa sy tena izy dia ny mamerina ny vatana ara-nofo amin'ny lehilahy na vatana tsy lavorary ao an-damosina na ny vatany, izany hoe amin'ny vatany izay tafiditra ao amin'ny vatana nofoanana tonga lafatra ny vatany ary naverina tamin'ny laoniny, natsangana tamin'ny maty , ho an'ny fahalavorariana taloha sy tany am-piandohana ary tsy mety maty.
hamaly faty: dia faniriana hanoanana hampijaly olona iray amin'ny valifaty ary fanasaziana ireo hadisoana marina na eritreretina niaretana, ary mba hahafaly ny faniriana hamaly faty.
Rhythm: dia ny toetra sy ny hevitry ny hevitra aseho amin'ny alalan'ny fepetra na hetsika amin'ny feo na endrika, na amin'ny famantarana na teny soratana.
ankavanana: dia ny habetsaky ny fahalalana izay mahatsiaro saina, araka ny fanapahan-keviny avy ao anatiny.
rariny: dia ny fenitry ny eritreritra sy ny fihetsika, araka ny lalàna nosoratana sy ny fitsipi-pitondran-tena, ho an'ny mpihetseham-po sy faniriana ao amin'ny vatana. Ao amin'ny fo izy io.
alahelo: dia ny fahakelezan'ny fahatsapana amin'ny fisainana mipoitra.
Self, The Higher: dia ny faniriana na ny fanirian'ny olombelona izay mahatsapa ho ambony kokoa, ambony, ambony kokoa noho ny faniriana, ny nofo, ny trivial sy ny faniriana kely amin'ny fiainany andavanandro. Ny tena ambony dia tsy ny fisarahana
faniriana ao amin'ny olombelona, ​​fa ny olona kosa mihevitra ny tenany ho ambony kokoa satria izy, toy ny faniriana, dia mifamatotra tsy misy firaiketam-po amin'ny fitiavan-tenan'ny tompon'ilay Triune Self, noho izany ny loharano tena ilan'ny faniriana ny "ny Higher Self".
Self-poana: dia ny toe-piainan'ny mpanao asa tanana amin'ny alàlan'ny famelana aingam-panahy na fandroahana, fanavakavahana na fanavakavahana, fisainana mitaona.
Selfness: dia ny fahalalana ny tenany ho toy ny mpampiasa ny Triune Self.
fihetseham-po: dia ny fifandraisana sy ny fahatsapan'ny fiasan'ny natiora amin'ny fahatsapana, amin'ny alalan'ny fahatsapana sy ny fitsiriritan'ny vatana, miteraka fahatsapana, fihetseham-po, faniriana. Ny fahatsapana dia tsy fihetseham-po, fihetseham-po, na faniriana. Raha tsy misy ny vatany, ny fahatsapana dia tsy misy fahatsapana. Raha ny fahatsapana dia ao amin'ny vatana no misy ny onjam-pitaovan'ny natiora manjavozavo avy amin'ny fahatsapana ary mandalo amin'ny vatana ho toy ny fahatsapana amin'ny fahatsapana, tahaka ny fahitana ny loko amin'ny taratasy. Raha tsy misy ny ranomainty sy ny taratasy dia tsy hisy pejin-tranonkala, noho izany raha tsy misy ny fomban'ny natiora sy ny fahatsapana dia tsy hisy fahatsapana. Ny fanaintainana sy ny fahafinaretana ary ny fihetseham-po, ny fifaliana sy ny fanantenana ary ny tahotra, ny alahelo, ny haizim-pito ary ny fahavetavetana dia ny fahatsapana, ny vokatry ny fahatsapana natao tamin'ny fahatsapana, amin'ny fifandraisana amin'ny singa natiora. Toy izany koa ireo valin-teny amin'ny faniriana ny fahatsapana natao tamin'ny fahatsapana, toy ny fitiavam-bavaka, ny hatsiaka, ny fitsiriritana, ny fitiavam-bavaka, ny habibiana, ny faniriana, ny faniriana. Saingy ny faniriana ao amin'ny tenany tsy misy ny vatana dia tsy misy amin'izy ireo, tsy mihoatra noho ny fahatsapana ny fahatsapana natao taminy noho ny fifandraisana amin'ny singa natiora.
Feon'ny Vatana: dia ireo ambasadaoron'ny natiora ao amin'ny kianjan'ny olona; ireo solontenan'ireo singa efatra lehibe amin'ny afo, ny rivotra, ny rano ary ny tany, izay taratry ny maso, ny fihainoana, ny fanandramana ary ny fofona amin'ny vatan'olombelona.
fihetseham-po: dia hevitra maneho amin'ny fahatsapana sy ny fisainana momba ny olona, ​​toerana na zavatra.
fihetseham-po: dia ny fanimbana ny fahatsapana amin'ny fihetseham-po diso.
vavy: dia ny fitrandrahana ny toetran'ny eritreritra amin'ny faniriana sy ny fahatsapana miteraka vatana sy lahy.
ara-pananahana: dia ny toe-tsaina mihatsaravelatsin'ny fahatsapana sy ny faniriana ao amin'ny vatan'ny olombelona izay mahatsapa endrika sy fizotran'ny natiora-adala na toetran'ny natiora.
Sight: dia singa iray misy afo, miasa ho ambasadera ny singan'ny afo ao amin'ny vatan'ny olona. Ny fahitana dia ny fantsona izay mahatonga ny singa afo sy ny rafitra miteraka ao amin'ny vatana ary mihetsika amin'ny tsirairay. Ny maso dia ny singa natiora izay mifandray sy mandrindra ny taova amin'ny rafitra miteraka ary miasa toy ny fahitana amin'ny fifandraisana araka ny tokony ho izy ny taova.
manentsin-tadiny; dia fahalalana amin'ny fialonana: fahatoniana tsy misy fihetsehana na feo.
Sin: dia ny fisainana sy ny fanaovana izay fantatry ny olona ho diso, manohitra ny rariny, izay fantatry ny olona ho marina. Ny fialan-tsasatra amin'izay fantatra ho marina, dia fahotana. Misy ny fahotana manohitra ny hafa, manohitra ny hafa ary manohitra ny natiora. Ny sazy vokatry ny fahotana dia ny fanaintainana, ny aretina, ny fijaliana ary ny fahafatesana amin'ny farany. Ny fahotana tany am-piandohana dia ny eritreritra, ary arahin'ny firaisana ara-nofo.
fahaiza-manao: dia ny halalin'ny zavakanto amin'ny fanehoana ny zavatra eritreretin'ny olona sy ny faniriany.
torimaso: dia ny famelana ny fahatsapana sy ny fanirian'ny mpankahala, ny rafi-pitabatabana ary ireo fahatsapana efatra amin'ny vatana, ary ny miala ao anaty torim-paka tsy misy nofy. Ny famelana aleha dia vokatry ny fanimbana ny asan'ny vatana noho ny ilana fitsaharana, ny natiora hanamboarana ny fako, ary ny fanamafisana ny vatana mandritra ny tsy fisian'ny mpandeha. Avy eo dia tsy mifandray amin'ny natiora ilay mpankafy ary tsy mahita, mihaino, manohina na manify.
manimbolo: dia singa iray amin'ny elanelan'ny tany, ny solontenan'ny endriky ny tany amin'ny vatana. Ny fofona dia ny tany izay ahafahan'ny endriky ny tany sy ny rafi-pandaminana ao amin'ny vatana mihaona sy mifandray. Mihetsika amin'ny fihainoana, mihaino asa amin'ny alalan'ny tsirony, manandrama mihinana fofona, manitra amin'ny vatana. Ny fahitana dia mirehitra, mandre ny rivotra, manandrana ny rano, ary mamy ny tany mafy. Ny fofona no fototra ijoroan'ny razana telo hafa.
Somnambulism: dia mandeha mandritra ny torimaso lalina, ny fanaovana zavatra amin'ny alalan'ny torimaso toy ny hoe mifoha, ary, amin'ny tranga sasany, ny fanaovana zavatra izay tsy hanandrana ny somnambulist raha mbola mifoha. Somnambulism dia vokatry ny fisainana mandalo raha miohatra; Ary ny fisainana toy izany dia mahatonga fahatsapana lalina amin'ny endrika fofona. Ary indraindray dia ao anatin'ny torimaso lalina izay nanonofy tao amin'ny fanjakana mitranga dia tanterahana amin'ny endrika endrika fanorona, araka ny drafitra voasoratra etsy ambony amin'ny somnambulist.
Somnambulist, A: dia mpihazakazaka torimaso, iray izay mahatsiaro ary ny vatany sy ny fofon'ain'ny volo no mampihetsi-po ary mety amin'ny soso-kevitra; Izay mihevitra ny zavatra tiany hatao nefa matahotra ny hanao. Ny zavatra nosaintsaininy nandritra ny andro-nofinofy tany amin'ny fanjakana nahantona dia naparitaka tamin'ny alalan'ny fofony nandritra ny torimaso. Saingy, rehefa mifoha izy, dia tsy mahatsiaro ny zavatra nataon-dry zareo mba hatao matory.
Soul: Ny zavatra tsy misy fiafaràn'ny fivavahana sy filôzôfia, indraindray dia nilaza fa tsy mety maty ary tamin'ny fotoana hafa dia nilaza fa ny fanamelohana ho faty, izay niandoha ny fiaviny sy ny anjarany, saingy izay efa nanampy hatrany ny maha-tafiditra na ny ifandraisany amin'ny olombelona vatana. Izany no endriky ny endriky ny fofon-tenan'ny vatana; Ny toetrany dia ny fofon'aina.
Space: dia zava-poana, tsy misy na inona na inona tsy misy porofo sy tsy mahatsiaro tena, izany no niaviany sy loharanon'ny zavatra hita rehetra. Tsy misy fetrany, ampahany, fanjakana na fari-piainana. Amin'ny endriny isan-karazany, izay misy ny endriny rehetra ary ny toetoetran'ny zavaboary rehetra dia mihetsika ary manana ny maha izy azy.
Fanahy: dia ny andaniny avy amin'ny vondrona natiora izay mamelona sy miasa amin'ny alàlan'ny sehatra iray hafa na ny sanda misy azy, izay antsoina hoe raharaha.
fanahy ratsy:. izay antsoina matetika hoe spiritisme, dia mifandray amin'ny natiora na ny singa amin'ny afo, ny rivotra, ny rano ary ny tany, indraindray miaraka amin'ny ampahan'ny mpankafy ny olona izay niala tamin'ny fiainana an-tany. Ireo matetika dia hita na mifandray amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao amin'ny tranzé. Amin'ny tranzona, ny vatana orambe na ny astra dia ny fitaovana na endrika ampiasana amin'ny hoe ilay misaraka dia miseho, ary ny ampahany avy amin'ny vatana ara-nofo amin'ny vatany ary ny ampahany amin'ny vatan'ny mpijery dia mety hosintonina mba hanome ny vatany sy ny lanjany . Na dia eo aza ny tsy fahalalana sy ny fametavetana mifandraika amin'ny fitrandrahana toy izany dia mety hiverina ny ampahany amin'ny maty ary miseho amin'ny alalan'ny fitaovana miditra.
fananana: dia tsy misy toerana, tsy misy faritra, homogeneous, mitovy, ny rehetra izay tsy misy "zavatra", ny singa tsy mitongilana, izay, na izany aza, amin'izao fotoana izao manerana ny natiora.
fahombiazana: dia amin'ny fanatanterahana ny tanjona.
Succubus: dia endrika endrika vehivavy tsy hita maso miezaka ny mitandrina na manao firaisana amin'ny lehilahy mandritra ny torimaso. Toy ny incubus, succubi dia karazany roa, ary variana amin'ny endrika sy ny fikasana. Ny Incubi sy ny succubi dia tsy tokony hilefitra amin'ny fanambakana rehetra. Mety hampidi-doza be izy ireo, ka mahatonga ny olona hijaly.
Symbol, A:dia zavatra hita maso maneho ny foto-kevitra tsy hita maso izay tokony hisaina, toy ny tenany na mifandray amin'ny lohahevitra hafa.
Andramo: dia singa iray amin'ny elanelan'ny zavamananaina dia lasa mandroso amin'ny maha-minisitry ny natiora azy ao amin'ny vatana. Ny Taste dia ny fantsom-pifaneraserana ny elanelan'ny rano sy ny rafi-pandrefesana ao amin'ny vatana. Ny Taste dia ny natiora voajanahary izay mifangaro sy mitantara ny vongan-tany sy ny tany ao anaty vongan-drano mba hanomanana azy ireo hivezivezy sy fitsaboana ary ao amin'ny taova manokana mba hiasa toy ny tsiro.
Thinker: Ny tena mpandinika ny Triune Self dia eo anelanelan'ny mpampiasa azy, ary ny mpankahala azy amin'ny vatan'olombelona. Mihevitra izy io amin'ny saina amin'ny fahamarinana sy ny saina. Tsy misy fisalasalana na fisalasalana eo amin'ny fisainany, tsy misy tsy fifanarahana eo amin'ny fahitsiny sy ny antony. Tsy manao fahadisoana ny fisainany; ary izay heveriny fa mahomby.
Ny mpihira eo amin'ny vatany dia mibaribary sy tsy mitongilana amin'ny fisainana; Ny fahatsapana sy ny fanirian-tsainy dia tsy midika hoe fifanarahana, ary ny toe-tsainy dia mifehy ny saina izay mieritreritra amin'ny alalan'ny eritreritra sy ny zavatry ny fahatsapana. Ary, raha tokony ho amin'ny mazava mazava, ny fomba fisainana dia atao matetika ao anaty zavona iray ary ny hazavana miparitaka amin'ny zavona. Na izany aza, ny sivilizasiona eo amin'izao tontolo izao dia vokatry ny fisainana sy ny eritreritra izay nahatonga izany. Raha ny sasany tamin'ireo mpankafy ny vatan'ny olombelona no nahatsapa fa izy ireo dia tsy mety maty, ary mifehy raha tsy voafehin'ny, ny vatany, dia afaka mamadika ny tany amin'ny zaridaina iray izy ireo amin'ny lafiny rehetra amboniny paradisa.
-misaina: dia ny fitazonana mihazona ny fahazavana mahazatra ao anatin'ny resaka momba ny fisainana. Izany dia dingana (1) ny fifantenana ny foto-kevitra na ny famolavolana fanontaniana; (2) mampitodika ny fahazavana mahazatra eo aminy, izay atao amin'ny fanomezana ny fiheveran'ny olona azy; (3) amin'ny fitazonana mihazakazaka ary mifantoka amin'ny Fahazavana Mahatsiaro amin'ny lohahevitra na fanontaniana; ary (4) amin'ny fitondrana ny hazavana mba hifantohana amin'ny foto-kevitra. Rehefa mifantoka amin'ny teboka ny Light Conscious, dia manokatra ny fahafenoan'ny fahalalana manontolo momba ilay foto-kevitra voafidy na valiana amin'ny fanontaniana nofaritana. Ny fiheverana dia misy fiantraikany amin'ny lohahevitra mifanaraka amin'ny fahantrany sy ny fahamarinana sy ny fahefan'ny
Mieritreritra, mavitrika: dia ny fikasana hieritreritra momba ny lohahevitra iray, ary ny ezaka atao hitazonana ny fahazavana mahazatra ao anatin'ilay foto-kevitra, mandra-pahafantarana an'io lohahevitra io, na mandra-pialan'ny saina, na mivadika ho foto-kevitra hafa.
Eritreritra, Passive: dia ny fisainana izay vita tsy misy fikasana mazava; Manomboka amin'ny eritreritra mandalo izy io na ny fahatsapana ny eritreritra; ny filalaovan-tena tsy mendrika na ny andro-nofinofisina misy iray na telo sainan'ny mpanao asa tanana ao amin'ny Light
tahaka ny any amin'ny rivotra.
Ny fisainana tsy mamorona fisainana, izany hoe, ny tanjony: Nahoana no mieritreritra ny olona iray? Heveriny fa ny eritreriny dia manery azy hieritreritra, momba ny zavatra eritreretina, momba ny olona sy ny fisehoan-javatra ary ny fanehoan-keviny amin'izy ireo. Ary rehefa mihevitra izy fa te-ho zavatra, hanao zavatra, na hahazo na hanana zavatra. Tiany! Ary rehefa tiany izy dia mametraka ny tenany sy ny fahazavana amin'ny eritreritra iray, amin'izay tiany; Namorona hevitra iray izy. Midika izany fa ny fahazavany ao an-tsainy dia nofatorana tamin'ny faniriany izay te hanao, ny raharaha sy ny fihetsika, na ny zavatra na zavatra tiany. Amin'ny alalan'io hevitra io no nananganany sy namatotra ny hazavana sy ny tenany. Ary ny fomba tokana azony atao mba hanafahana ny fahazavana sy ny tenany amin'izany fifandraisana izany dia ny tsy hikorontana; izany hoe tsy maintsy mandanjalanja ny eritreritra izay mamatotra azy izy, amin'ny famotsorana ny fahazavana sy ny faniriany amin'ny zavatra te. Mba hanaovana izany, dia mitaky ny fiainana tsy hita isa, ny taona, ny fianarana, ny fahatakarana; mba hahatakarany fa tsy afaka manao zavatra tsara sy tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra izay mifatotra sy mifatotra izy, araka izay azony atao raha tsy mifatotra izy, tsy voafehy. Ny fanirianao dia ianao! Ny fihetsika na zavatra tianao dia tsy ianao. Raha manaiky ianao ary mamatotra izany amin'ny eritreritra iray, dia tsy afaka manao zavatra ianao raha toa ka tsy mifatotra sy maimaim-poana ny manao fihetsika. Noho izany, ny fisainana izay tsy mamorona eritreritra dia tsy afaka ny hieritreritra, ary tsy maniry, manana, mihazona, afa-manatanteraka, manana, mitazona, tsy voafatotra amin'ny asa, amin'izay anananao, amin'izay hazòny. Izany hoe, mieritreritra malalaka. Avy eo dia afaka misaina mazava ianao, miaraka amin'ny mazava mazava, ary amin'ny hery.
Hevitra, A: dia zava-manan'aina eo amin'ny natiora, noforonina sy nokarohina tao am-pony tamin'ny alalan'ny fahatsapana sy faniriana amin'ny fahazavana Conscious, novolavolaina sy nivoaka avy amin'ny atidoha, ary izay hanafintohina azy ho asa, zavatra na hetsika, hatrany hatrany dia mandanjalanja. Ny mpitaiza ny hevitr'ilay hevitra dia tompon'andraikitra amin'ny vokatra rehetra mivoaka avy amin'izany mandrapahatonga io hevitra io handanjalanja; Izany dia noho ireo traikefa avy any ivelany, ny fianarana avy amin'ny traikefa, ny mpankafy
dia manafaka ny fahazavana sy ny fahatsapana ary ny faniriana avy amin'ny zavaboary izay nifamatoran'izy ireo, ka nahazo fahalalana.
Hevitra, Balancing a: Ny eritreritra dia manaisotra ny fahazavana amin'ny eritreritra rehefa mifamatotra ny fihetseham-po sy ny faniriana ary ny roa dia mifanaraka amin'ny fitiavan-tena mikasika ny asa, zavatra na zava-niseho izay notoraham-piainako. Avy eo dia manindrona sy mamerina ny fahazavana amin'ny rivotra iainana ny eritreritra ary mihalalina ny heviny, ary tsy misy intsony.
Ny hevitra, ny tanjaky ny fandrosoana amin'ny: dia ny marika izay manamarika ny feon'ny fieritreretana amin'ny heviny ho toy ny tombo-tsoa amin'ny tsy fankasitrahana amin'ny fotoan'ny famoronana ny eritreritra amin'ny fahatsapana sy ny faniriana. Amin'ny alàlan'ny fanovana rehetra sy ny fitrandrahana ny eritreritra dia mbola mitohy ny marika mandra-pandanjalanjana izany eritreritra izany. Ny marika sy ny hevitra dia nanjavona rehefa voalanjalanja ny eritreritra.
Kevitra, manapaka: Ny eritreritry ny mpiahy amin'ny fotoana misy ny fahafatesana dia ny eritreritra manohana ny fiainana eto an-tany. Mety hiova izy io, kanefa raha manitsy azy io dia misy fiantraikany amin'ny fisainany izany, manampy amin'ny fifantohan'ny mpiara-miasa sy ny fitarihana azy
na mampahafantatra azy amin'ny hafa ny eritreritra toy izany. Matetika izy io no manapa-kevitra amin'ny fisafidianana asa na orinasa na asa izay azony atao mandritra ny fiainana. Raha mbola mitoetra ho ny didim-pitsarany izy io dia manasitrana ny fandehanany sy manome izany
loko eo amin'ny fomba fijeriny ny fiainana.
Hevitra, nitsidika: Thoughts circulate; toy ny adala izy ireo toy ny ray aman-dreniny; Mifanindry izy ireo amin'ny ati-olombelona ara-tsaina, noho ny tanjona sy ny zavatra noforoniny, ary mihaona amin'ny ati-dalan'ny tombotsoan'ny olombelona izay mamorona azy ireny. Ny hevitra no antony lehibe indrindra mahatonga ny fivoriana sy ny fiarahan'ny olona; ny fitovian'ny hevitr'izy ireo dia manambatra ny olona.
Time: dia ny fiovan'ny tarika na ny vondron'ny tarika amin'ny fifandraisan'izy samy izy. Misy karazana fotoana maro eto amin'izao tontolo izao sy any amin'ny firenena samy hafa. Ohatra: ny habetsaky ny singa mamorona ny masoandro, ny volana, ny tany, ny fifandraisana amin'ny fifandraisan'izy ireo, dia mitovy amin'ny masoandro, ny fotoan'ny volana, ny tany.
Transmigration: dia ny dingana izay manaraka ny fatoran'ny lehilahy sy ny vehivavy mikraoba amin'ny fofon'aina, ny fanahin'ny vatana amin'ny ho avy, amin'ny fahatanorana. Izy io no mifindra monina sy manangona miaraka ny rehetra
singa sy fiainana ary endriny karazana avy amin'ny fanjakana mineraly sy legioma sy biby, izay natolotra azy ireo taorian'ny nahafatesany, ary mifandray sy manangana azy ireo ho lasa vatan'olombelona vaovao, tontolo iray vaovao, araka ny fanahy, ny endriky ny vatany ary, ary manomana izany ho toeram-ponenana ara-nofo ho an'ny fiverenana sy ny fialan-tsasatra ny ampahan'ny anjara amin'ny Triune Self. Ny fifindran'ny vondron'ny vatana dia manerana na manerana ireo fanjakana ireo
ny natiora: ny mineraly na ny elemental, ny zavamaniry na ny legioma, ary ny biby, ho zazakely. Izany no fiafaran'ny fifindran'ny fanahy, ny endriny, ho an'ny olombelona, ​​na avy amin'ny fanjakana telo avy amin'ny natiora ho an'ny olombelona.
Triune Self: Ny ampahany tsy azo antoka sy tsy mety maty indraindray; Ny maha-izy azy sy ny fahalalany dia toy ny mpampiasa; ny rariny sy ny hitsiny ary ny anton'ny fisainany, ao amin'ny mandrakizay; ary, ny faniriany sy ny fahatsapany ho toy ny mpihinam-batana, izay mitranga matetika eto an-tany.
Fahaleovan-tena ho an'izao tontolo izao, Ny: dia ny maha-famantarana ny tontolo mipoitra avy amin'ny Triune Selves, ary mijoro amin'ny fifandraisany amin'ny Intelligence avo indrindra toy ny an'ny Triune Self amin'ny Intelligence.
Trust: dia ny finoana lalina ny fahamarinan-toetra sy ny fahamarinan'ny olombelona hafa, satria misy ny fahatsoram-po miorina amin'ny olona mahatoky. Rehefa diso fanantenana amin'ny fitokisany amin'ny hafa ny iray dia tokony
tsy mitoky amin'ny tenany izy, fa tokony hianatra hitandrina, ary hitandrina ny zavatra sy izay itokisany.
marina:dia ny faniriana ny hieritreritra sy hiteny tsotra izao momba ny zavatra tsy te hanalany na hametaveta ny foto-kevitra eritreritra na lazaina. Mazava ho azy, mazava ho azy fa takatry ny olona ny tsy hiseho
miondrika na manontany izay rehetra fantany.
Types: Ny karazana dia voalohany na fiandohan'ny endrika, ary ny endrika dia ny fampidirana sy ny famenoana ny karazana. Ny hevitra dia ny karazana biby sy zavatra ary endri-tsoratra miorina amin'ny teny maneho ny fihetseham-pon'ny olombelona sy ny faniriana eo amin'ny sehatry ny natiora.
-tsaina; dia ny fahatsapana sy ny fahatsapana ny zavatra avy amin'ny tenany, ny maha-izy azy, ary ny fahatakarana ny antony maha-izy azy ireo ary mifandraika amin'izany.
Unit, A: Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Ny endrika naseho dia manana vava mavitrika sy mifanohitra, araka ny asehon'ny tondro zotra midina. Ny fiovana natao tamin'ny fifandraisana misy azy dia vokatry ny tsy fisian'ny fisehoan-javatra tamin'ny alalan'ny roa tonta. Ny tarika tsirairay dia manana ny fahafahana ho lasa iray amin'ny tena zava-misy marina-fahatsiarovan-tsaina-amin'ny fivoarany tsy tapaka amin'ny fahatsiarovan-tena mandrakizay
Units: Ny fampiofanana sy ny fanabeazana ny singa dia mifototra amin'ny soso-kevitry ny rafitra rehetra momba ny natiora izay manana ny fahaiza-manaony ho lasa fahiratan-tsaina. Ny fampianarana ny tarika dia atao ao amin'ny Anjerimanontolo momba ny lalàna. Lalàna iray amin'ny Oniversite dia
ny vatana ara-batana tsy manan'olon-tena, ny fanjakam-pahamendrehana, izay tarihin'ny mpikarakara sy ny mpandinika ary ny tompon'andraikitra amin'ny Triune Self feno araka ny Order Progression Mandrakizay.
Ny fanabeazana ny vondron'olona tsy manam-pahaizana dia mifototra amin'ny fitomboan'ny fahombiazana amin'ny fahombiazany amin'ny maha-asa azy amin'ny ambaratonga rehetra mandrapahatongany any amin'ny Oniversite, mba ho lasa rafitra manam-pahaizana mihoatra ny natiora.
Ny mari-pahaizana ao amin'ny vatana tonga lafatra dia: singa mpikorisa, singa mpamorona, ary singa misaina, ary farany dia misy ny fitaovan'ny atidoha, izay miofana mba hahazoana diplaoma avy amin'ny natiora ary ho vondrona mahatsiaro saina as tenany sy of rehetra
zavatra sy lalàna. Ireo singa mpandidy dia avy amin'ireo mpamorona izay tafiditra ao ary miasa ho rafitra ao amin'ny faritra rehetra ao amin'ny lalànan'ny oniversite. Mandritra ny fialan'izy ireo dia mahazo hery izy ireo ary ampangaina ho lalàna ary alefa ho lalàna mifehy ny natiora. Ireo singa mpandoka dia ireo ambasadera avy amin'ireo singa lehibe afo, rivotra, rano ary tany, izay tokony hitarika ireo rafitra sy rafi-pampandrosoana efatra, sy ny fiterahana ary ny fitsaboana, izay ny taova
dia ampahany miasa. Ny vondrona ara-batana dia mandrindra ny fahatsapana sy ny rafitra ary ny taova ao amin'ny rafitra mifehy ny vatana.
Units, Nature: dia miavaka amin'ny fahatsiarovan-tena as ny asany ihany. Ireo vondrona natiora dia tsy mahatsiaro of na inona na inona. Misy karazany efatra: singa maimaim-poana izay tsy mifatotra sy tsy mifatotra amin'ny vondrona hafa na ny rafitra; ireo singa mivezivezy, izay tafiditra ao anatin'ny rafitra na ny masomboly mandritra ny fotoana iray ary mandalo; singa mpamorona, izay mamorona sy mitazona singa mpikorisa mandritra ny fotoana iray; ary manavaka ireo singa, toy ny fahitana, ny sofina, ny tsiro ary ny fofona, izay mifehy na manapaka ny rafitra efatra amin'ny vatan'olombelona. Ny singa rehetra momba ny natiora dia tsy manan-tsaina.
Unit, vondrona iray: Amin'ny alalan'ny selan'ny sela dia mifandray amin'ny singa rehetra izay misy ny organ ny singa mpiorina iray, mba hahafahany manao ny asany na ny asany izay mampifandray izany amin'ny taova hafa amin'ny iray amin'ireo rafitra efatra ao amin'ny vatana it belongs.
Units, fahatsapana: dia ireo singa efatra mifandray amin'ny vatany izay mampifandray sy mampifandray ireo fahitana efatra, ny fihainoana, ny fanandramana ary ny fofona, miaraka amin'ireo rafitra efatra misy azy ireo: ny fahitana miteraka, ny fihainoana amin'ny rivotra, ny tsirony amin'ny fandefasana ary ny fofona amin'ny ny digestive; ary, miaraka amin'ireo singa efatra: afo, rivotra, rano ary tany.
Vanity: dia ny fahabangan'ny tsy hita maso sy tsy misy fankasitrahana amin'ny zavatra rehetra na toerana sy toerana izay tadiavin'izao tontolo izao, raha ampitahaina amin'ny Fanjakana ny Faharetana; Tsy mahafantatra ny tsy fahampian'ny fikatsahana ny
fifaliana amin'ny laza, ary ny fientanam-pandrenesana sy ny fisehoan-javatra, rehefa ampitahaina amin'ny herin'ny sitrapo ny fisehoana amin'ny fahatsorany sy ny fahamarinany.
Vice, Cloaks of: eto dia antsoina hoe, fanirian-dratsy sy fahavetavetan'ny mpankahala iray eo amin'ny fiainan'ny olombelona, ​​izay, aorian'ny fahafatesany, dia miteraka fijaliana rehefa miezaka ny misaraka amin'izy ireo ny mpijinja. Ny faniriana fototra toy ny akanjon'ny lozika dia mijaly koa,
satria tsy manam-paharetana izy ireo raha tsy misy vatan'olombelona. Noho izany dia matetika izy ireo no mikatsaka ny rivotry ny olona iray izay manana faniriana ary vonona na ho lasa niharam-panenjehana amin'ny fimamoana na heloka bevava.
ny hatsaran-toetra: dia hery, tanjaka ny sitrapo, amin'ny fampiharana ny fahamarinan-toetra sy ny fahamarinana.
Afaka, maimaim-poana: Ny sitrapo no faniriana manan-danja indrindra, amin'ny fotoana, amin'ny vanim-potoana, na amin'ny fiainana. Manjaka ny faniriany mifanohitra izy ary mety hanjaka amin'ny fanirian'ny hafa. Ny faniriana no hery matanjaka ao anatiny, izay mety hitondra fiovana ao aminy na fanovana zavatra hafa. Tsy misy faniriana ny olona, ​​satria mifatotra na mifatotra amin'ny sain'ny sainy rehefa misaina. Ny faniriana iray dia afaka mifehy na voafehin'ny faniriana iray hafa, saingy tsy misy faniriana afaka manova faniriana hafa na voatery miova. Tsy misy fahefana afa-tsy ny tenany ihany no afaka manova izany. Ny faniriana dia mety ho resin'ny fakam-panahy, manaparitaka, ary manolo-tena, saingy tsy azo atao ny miova tena raha tsy mifidy sy maniry hiova. Afaka misafidy izy na tsia. Ity hery ity hisafidy raha mbola hifanaraka amin'izany na ny zavatra ataony, na hamela ny zavatra hitranga sy tsy hikorontan-tsaina izy, dia ny fahalalahany, ny teboka malalaka sy ny faniriana rehetra. Mety hanitatra ny teboka amin'ny faritra malalaka amin'ny fahavononana ny hanao, hanao, na hananana, tsy hifikitra amin'ny zavatra tokony hatao, na atao, na hanana. Rehefa mieritreritra ny hevitr'ilay sitrapo tsy misy ifandraisany amin'ny eritreritra, dia afaka ary manana fahafahana izy. Amin'ny fahalalahana dia afaka manao na manao izay tiany hatao sy atao izy na tsia, raha mbola tsy voavaha ny olana. Ny fahafahana malalaka dia tsy azo alaina, tsy fialana.
fahendrena: dia ny fampiasana tsara ny fahalalana.
Work: dia asa ara-tsaina na ara-batana, ny fomba sy ny fomba izay tontosaina amin'ny tanjona.
World, Noetic: dia tsy tontolo feno zavaboary; Io no sehatra manan-tsaina na fahalalana momba ny Fanjakan'ny Faharetana, tokana ahitana ny atmosfera avy amin'ny Triune Selves sy ny lalàna mifehy ny natiora. Izy io dia fahalalana tsy manam-pahataperana momba ny Triune Selves rehetra sy ny momba ny lasa, ny ankehitriny, ary izay voafaritra ho ho avin'ny tontolo efatra eto an-tany. Ny fahalalana sy ny fiovaovan'ny fahalalana eo amin'ny tontolon'ny olombelona amin'ny alalan'ny fanandramana sy ny fanandramana dia tsy afaka manampy amin'ny tontolon'ny fahalalana. Ireo dia toy ny vokatra amin'ny fahavaratra sy ny ririnina, izay tonga sy mandeha. Ny tontolon'ny fahalalana
dia ny habetsaky ny fahalalan'ny rehetra Triune Selves, ary ny fahalalana ny zava-drehetra dia misy amin'ny Triune Self tsirairay.
Wrong: dia io eritreritra na fihetsika io izay fialana amin'ny zavatra mahatsapa ho marina.